အေမာမ်ဇမာန်း (အ.ဂျ) သခင်၏ ဟဒီးစ်တော် ၁၇ ပါး အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
နိုဝငျဘာ ၅, ၂၀၁၈ - ၁၀:၀၂ ညနေ News Code : 915461 Source : ABNA Link:
ဟဒီးစ်တော်အမှတ် ( 1 )
မရှီရသ်သေအေလာဟီ နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက် (:) ၏ နှစ်မြို့မှု
)قُلُوبُنٰا اٴَوعِیَةٌ لِمَشِیَّةِ اللهُ، فاِذَا شَاءَ اللهُ شِئنَا، وَاللهُ یَقُولُ: (وَ مٰا تْشٰاوٴُونَ إِلّا اٴَنْ یَشٰاءَ اللهُ)(
( ကျွန်ုပ်တို့ (အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ)) ၏ နှလုံးသား သည်မရှီယသ် သေ အေလာအီ ထည့်သည့် ခွက်များ ဖြစ်ပါ သည်။ အကယ် ၍ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်အနေဖြင့် အရာ တစ်ခုခု ကို ရည်မှန်းမည် ၊ လိုလား တောင်းတမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လည်း တို့အရာကို ရည်စူးမည် ၊ လိုလား တောင်းတမည် ဖြစ်ပါ သည်။ အကြောင်းမှာ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်မိန့်တော် မူသည် ̏ အသင်တို့ သည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် လိုလား နှစ်သက် သည့် အရာကို သာ လိုလား နှစ်သက်လေ၏။ ̋ )
အေမာမ်ဇမာန်(24) အနေဖြင့် ဤ စကားစု၌မိုကဆ်စေရဟ် (مقصّره) နှင့် မိုဖောက်ဝေဇဟ်(مفوّضه) တို့အားချေပရင်း ကာမေရ် ဗင် အီဗရာဟင်မ်အား မိန့်တော်မူထား လေ သည်။
(ထိုသူများ (မိုကဆ်စေရဟ် နှင့် မိုဖောက်ဝေဇဟ်)သည် လိမ် လည်မုသားဆိုကြလေ သည်။တစ်နည်းဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ် တို့၏နှလုံးသားများသည်မြတ်အလ္လာဟ်နှစ်မြို့မှုထည့်ထား သည်ခွက်များ နေရာများပင်တည်း။အလ္လာဟ် နှစ်သက် သည့် အရာကိုကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်သက်လေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် မြတ် အလ္လာဟ် ၏လိုလားနှစ်မြို့မှုကိုဆန့် ကျင်ပြီးမည်သည့် နှစ်မြို့ လိုလားမှုကို (တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊သွယ် ၀ိုက် ဖြစ်စေ)ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမထားပေ။)
ဟဇရသ် အေမာမ် မူစာယေကာစင်မ် (7 ) ၏ဟဒီးစ် တော် တစ်ပါးတွင်လာရှိပါသည်။
(မုချ ဧကန်မြတ် အလ္လာဟ်သည်အေမာမ်(၁၂ပါး) ၏နှလုံး သား များကိုမိမိ၏လိုလားနှစ်မြို့ နှစ်သက်မှု ရည်မှန်းမှု ဆန္ဒ၏လမ်းအဖြစ်သတ်မှတ် ထားတော်မူလေ သည်။ဤ အတွက် ကြောင့်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည်မည်သည့် အရာကိုရည်မှန်း နှစ်မြို့မှုပြုလိုက်လျှင်အေမာမ်များ (:) သည်လည်းထိုအရာကိုရည်မှန်း နှစ်မြို့ တော်မူလေသည်။
ပြီးနောက်မြတ်အလ္လာဟ်မိန့်တော်မူသည်။(အသင့်တို့အဲဟ်လေ့ဘိုက် (:) သည်မြတ်အလ္လာဟ် နှစ်သက်မြတ်နိုးနှစ်မြို့ မှုမှအပအခြားအရာကိုလုံးဝ မလိုလားကြချေ။) ဖြစ်ပေ သည်။) 
အေမာမ်မဟ်ဒီ (4) ၏ဤဟဒီးစ်တော်မှပွိုင့်များကိုမီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။၎င်းပွိုင့်များမှာအချို့ကိုအောက် ပါအတိုင်း ညွှန်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁) နှလုံးသားများ သည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏နှစ်မြို့ မှု ၊နှစ်သက်မှုနေရာ(သို့မဟုတ်)ရှိုင်တွာန် (လ.န) ၏ နှစ်မြို့ မှု၊နှစ်သက်မှု၏ခွက်(သို့မဟုတ်) နေရာဖြစ်ကြောင်းသိရ ပေ သည်။
(၂)အေမာမ်များ(၁၂ပါး) (:) သည်ပြစ်မဲ့ဖြစ်ပေသည်။အကြောင်း သည်ကား၎င်းတို့၏နှစ်သက်မြတ်နိုးနှစ်မြို့မှုသည်မြတ်အလ္လာဟ်၏နှစ်သက်မြတ်နိုး နှစ်မြို့မှုပင် ဖြစ်သည့် အတွက် ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆို ဤကဲ့သို့သော် ရာထူး နေရာကို ပိုင်ဆိုင်လျှင်မိုကာမ်မေအေဆ်မသ်(မ)ပြစ်မဲ့နေရာကိုရောက်နေသူပင်ဖြစ်ပေသည်။
(၃)အဟ်လေ့ဘိုက်(:)၏နှစ်မြို့ လိုလားမှု နှစ်သက် ရည်မှန်းမှု သည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သခင်၏နှစ်မြို့၊နှစ်သက်ရည်မှန်းမှုကိုလိုအင်ထက်မကျော်ချေ။ရှေ့မရောက် ပေ။ထိုပြင်မြတ် အလ္လာဟ်၏ရည်မှန်းလိုအင် ဆန္ဒထက် လည်း နောက် မကျချေ။ဤအတွက်ကြောင့်အဟ်လေ့ ဘိုက်(:) နှင့် ဆက်နွယ် ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ လည်း ဤအတိုင်း ထား ရှိ ရ ပေမည်။
(၄)မြတ်အလ္လာဟ် မည်သည့် အရာကိုရည်မှန်းလို အင် နှစ်မြို့ မှုအဖြစ်၊ မမိန့်မခြင်းအဟ်လေဘိုက် (:) သည် လည်း ထိုအရာ ကိုမရည်မှန်း မနှစ်မြို့တော်မူချေ။
ဟဒီးစ်တော်အမှတ် (2)
နမာဇ်ဖြင့် ရှိုင်တွန် နှင့် ရှောင်ခြင်း
)مٰا اٴَرْغَمَ اٴَنْفَ الشَّیْطٰانِ اٴَفْضَلُ مِنَ الصَّلاٰةِ، فَصَلِّهٰا وَاٴَرْغِمْ اٴَنْفَ الشَّیْطٰانِ(
( မည်သည့် အရာ မျှ နမာဖ်ကဲ့သို့ ရှိုင်တွန် (လ.န) ၏ နှာခေါင်း ကို မြေကြီး နှင့်ပွတ်တိုက်သည် အရာ မရှိချေ။ ထိုအတွက် ကြောင့် နမာဇ် ဝတ်ပြုပါလေ။ အီဗလစ် (ရှိုင်တွန် (လ.န)) ၏ နှာခေါင်း အား မြေကြီးနှင့် ပွတ်တိုက်ပါလေ။ ) 
ဤ စကားစုသည် အေမာမ်ဇမာန်(4) အနေဖြင့် ဂျနာဗ် အဗူလ်ဟစန် ဂျာအ်ဖရ်ဗင် မိုဟမ္မဒ်အဆဒ်ဒီ မေးမြန်း လျှောက် ထားသည့် မေးခွန်း များ ၏ အဖြေ တွင်မိန့်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤဟဒီးစ်တော် အားသုံး သပ်၍သိရှိနိုင်သည်မှာ - မြေကြီးပေါ်တွင် ရှိုင်တွန် (လ.န)၏ နှခေါင်းအား ပွတ်တိုက်ခြင်း ( တစ်နည်း အားဖြင့် ရှိုင်တွန် (လ.န)အပေါ် အောင်နိုင်ရန် ) အတွက် အကြောင်း ခံ အချက်များ အများ အပြားလာရှိပါသည်။ ၎င်း အကြောင်းခံအချက်များမှ အရေးအကြီးဆုံး အချက်မှာ နမာဇ် ဖြစ်ပါသည်။အကြောင်းမှာ - နမာဇ်သည် အဖန်းဆင်း ခံများ ဘက် ဂရုမပြုခြင်း ကိုပြတ်တောက် ပြီး အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် ဘက်သို့ အပြည့်အဝ ဂရုပြုခြင်း နှင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အားတမ်းတ သတိရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်သခင်အနေဖြင့် မိန့်ကြား တော်မူ သည်မှာ -
)اٴَقِمْ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى(
ကျွန်ုပ်အား တမ်းတ သတိရရန် အတွက် နမာဇ်ဝတ်ပြု ဆောက် တည်ပါလေ။ 
မနုဿ လူသား အား ညစ်ညမ်း သည့် (အပြော အဆိုအမှု အရာ ) နှင့် မကောင်းမှု များမှ ထိန်းချုပ်ပေးသည့်နမာဇ် ဖြစ် ရပါ မည်။ (ထို့မှသာ) အနှစ်ချုပ် အားဖြင့် မနုဿလူသား အနေဖြင့် စိတ်ဆန္ဒ နောက်လိုက်ခြင်းအပေါ် နှင့် (ရှိုင်တွန် (လ.န) အပေါ် အောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဟဒီးစ်တော်အမှတ် ( 3)
နမာဇ်အချိန်ရောက်သည် နှင့် ဝတ်ပြုခြင်း
)مَلْعُونُ مَلْعُونُ مَنْ اٴَخَّرَ الْغَدٰاةَ إِلیٰ اٴَنْ تَنْقَضيِ الْنُجُومْ(
( မလ်အူးန် ဖြစ်ပါသည် ၊ မလ်အူးန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ် မည်သူမဆို သည် ဖဂျရ်နမာဇ် အား ကြယ်တာရာများ ပျောက်ကွယ် သွား သည့်အထိ တမင် တကာ နောက်ကျ အောင်ဆွဲ ဝတ်ပြု မည်။ )
( နမာဇ် အချိန်ရောက်သည်နှင့်ဆိုသည်မှာ အောင်ဝဲလ် လေဝက်သ် နမာဇ် ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ် ပါသည်။ တစ်နည်း အားဖြင့် နမာဇ် အချိန်ရောက်ပြီး သည် တပြိုက်နက် ၄ရကတ် နမာဇ် ဝတ်ပြုလိုရသည့် အတိုင်း အတာကို ခေါ်ဆို ပါ သည်။ ဘာသာပြန်ဆိုသူ )
ဤ ဟဒီးစ်တော်သည် အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (အ.ဂျ) ၏ သောက်ကီးအ် မှအစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မိုဟမ္မဒ်ဗင် ယအ်ကူဗ် ၏မေးခွန်း ကို အဖြေပေး ထားခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ အေမာမ် ဇမာန်း (4) အနေဖြင့်ဤ သောက်ကီးအ် တွင် နမာဇ်အချိန် ရောက်သည်နှင့် နမာဇ် ဝတ်ပြုရန် အလွန်တရာ တိုက်တွန်း မိန့်ကြား ထားပါသည်။ အကြင်မည် သူမဆို နမာဇ်ဖဂျရ်အား အလင်း ရောင် ထွက်လာချိန် (မိုးလင်း လာချိန်) ကြယ်တာရာ များပျောက်ကွယ် သွားချိန် အထိ နမာဇ်ကို အချိန်ဆွဲ ဝတ်ပြုသူ များ အပေါ် ကိုယ်တော် (4) အနေဖြင့် လအ်နသ် ပို့ထား ပါသည်။
ဤဟဒီးစ်တော် ပြီးနောက် အခြား ဟဒီးစ်တော်များ ကို လေ့လာ သုံးသပ်ပြီး ရလာဒ် ထွက်လာမည်မှာ - နမာဇ် အချိန် သည် ၃ ချိန် ဖြစ်ပါသည်။
၁ ။ မြင့်မြတ်သည့်အချိန် ။ မြင့်မြတ်သည့်အချိန် ဆိုသည်မှာ ဤ အောင်ဝဲလ်လေဝက်သ်နမာဇ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ၎င်းအချိန်ကို ရီဝါယသ်တော်များတွင် (رضوان اللہ) (အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်သခင် ၏ နှစ်မြို့မှု ) အဖြစ် အမည့်တွင် လာရှိပါ သည်။ ဤအချိန်သည် နမာဇ် ဝတ်ပြုရန် အတွက် အကောင်း တကာ အကောင်းဆုံး အချိန် ဖြစ်ပါသည် ။ အကြောင်းမှာ -
(က) ဤအချိန်တွင် နမာဇ် ဝတ်ပြု ရန် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင်ဘက်တော် မှ ကျရောက်လာ ပါသည်။ အလ္လာဟ် ဟို အရှင် မြတ် သခင်၏ အမိန့်တော်များ ကို အလေး ထား အရေးပေးခြင်း ၊ အလျင်အမြန် နာခံဆောင်ရွက် ခြင်း သည် (အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်၏ ) နှစ်မြို့ လိုလား မှု ကို ဖြစ်စေ ပါသည်။
(ခ) နမာဇ် သည် အမှန်တကယ် လိုလားတောင်းတမှု မကင်း သူ အဖန်ဆင်း ခံ နှင့် လုံးဝ (ဥသုာန်) လိုးလားတောင်းတမှု ကင်းသည့် အရှင် အကြား ဆက်သွယ်မှု နှင့် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင် ထံတော်မှ အကျိုး အမြတ် ရယူခြင်း ဖြစ်လေ ၏။ အမှန်တကယ် မနုဿ လူသား အတွက် အကျိုး အမြတ်ကို ဖြစ်စေပါသည်။ အလျင်အမြန် ၊ ချက်ချင်း ဤကိစ္စကို ဆောင် ရွက်ခြင်း သည် (အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်၏ ) နှစ်မြို့ လိုလား မှု ကို ဖြစ်စေ ပါသည်။
(ဂ) အေမာမ် ဇမာန်း (4) သခင်သည်နမာဇ်အားအောင် ဝဲလ်လေဝက်သ်တွင် (နမာဇ် အချိန်ရောက်သည် နှင့်ချက်ချင်း ) နမာဇ်ကိုဆောက်တည်လေ၏။ အကြင်မည်သူမဆို နမာဇ် အချိန်ရောက်သည် နှင့်ချက်ချင်း နမာဇ်ကို ဝတ်ပြု ဆောက် တည်မည်ဆိုလျှင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သည် ကိုယ်တော် (4) သခင်၏ နမာဇ် ၏ ဘရ်ကသ်တော်ကို အကြောင်းပြုပြီး ၎င်း၏ နမာဇ် ကို သဘောတူ လက်ခံတော်မူ မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း ၏ ကွာခြားနေမှုသည် အာနိသင် မရှိချေ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရလျှင် နမာဇ်များကို တစ်ချိန် တည်း ဝတ်ပြုခြင်းကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ချေ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုလိုသည်မှာ ခေါင်းစဉ် တစ်ခု တည်း အောက်တွင် တညီတညွတ်ရှိနေခြင်း ဆိုလိုသည်မှာ (( နမာမ်အား အောက် ဝဲလ်လေ ဝက်သ် တွင် ဝတ်ပြု ဆောက်တည် ခြင်း ကို )) ဆိုလိုပါသည်။ ယုတ်စွ လူတိုင်းလူတိုင်း မိမိတို့ နေရာ ၏ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း အရ နမာဇ်အချိန် ရောက်သည်နှင့် ချက်ချင်း ဝတ်ပြု ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂။ နောက်ဆုံး အချိန် ။ ရီဝါယသ်တော်များတွင် (غفران الله) (အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်သခင်၏ ခွင့်လွတ်ပလပ်မှု ) အဖြစ် အမည့် တွင် လာရှိပါ သည်။နမာဇ် အား အောင်ဝဲလ်လေဝက်သ် မှ နောက်ဆုံး အချိန် အထိ အချိန်ဆွဲ ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တားမြစ် ရှုတ်ချ ထားပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် အေမာမ် ဇမာန်း(4) သခင်သည် ဤကဲ့သို့သော် ပုဂ္ဂိုလ်အား မလ်အူးန် အဖြစ် နှင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သခင်၏ ရဲဟ်မသ်တော်မှ ဝေးနေသူအဖြစ် သတ်မှတ်လက်ခံထားပါသည်။
အခြားရီဝါယသ်တော် တစ်ခု တွင် အေမာမ် ဂျာအ်ဖရ် ဆွာဒစ် (7) သခင်မိန့်ကြားချက်လာ ရှိသည်မှာ -
( အောင်ဝဲလ်လေ ဝက်သ် တွင်နမာဇ် ဝတ်ပြုခြင်း သည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင်၏ လိုလား နှစ်မြို့ မှု ဖြစ်စေပြီး နောက် ဆုံး အချိန်မှ နမာဇ်ကို ဝတ်ပြုခြင်း သည် ဂိုနာဟ် (အပြစ်) ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင် ခွင့်လွတ် ပလပ် ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ) 
၃။ အချိန်မဟုတ်တော့သည့်အချိန် ။ နမာဇ်အချိန်မဟုတ်တော့မှ နမာဇ် ဝတ်ပြုသည့်အချိန်ကို ဆိုလိုပါသည်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသုံး အနှုန်း အရာ ၎င်း ကို (( ကဇွာ)) အဖြစ်အမည့် တွင်ထား ပါသည်။ အကယ်၍ အကြင်မည်သူမဆို နမာဇ်အား အချိန်အတွင်း ဝတ်မပြုခဲ့လျှင် မလွဲမသွေ ကဇွာ ပြန်ဝတ်ပြု ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤနမာဇ်သည် အမိန့်အသစ် တစ်ခု ကို အခြေခံပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အခုအကယ်၍ တစ်ဦး တစ်ယောက်မှ တမင်တကာ နမာဇ် အား နောက်ဆုံး အချိန်အထိ အချိန်ဆွဲဖတ်မည်ဆိုလျှင် ဂိုနာဟ် (အပြစ်) လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ မလွဲမသွေ သောင်ဗာ (ဝန်ချတောင်းပန်းခြင်း ) ပြုရပါ မည်။သောင်ဗာ မပြုလျှင် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်သခင် ချမှတ် မည့် ပြစ်ဒဏ်ထိုက်သူ ဖြစ်သွားပေမည်။ သို့သော် မေ့ပြီး နမာဇ် ဝတ်မပြုမည်၊ မည်သည့်အမှားအယွင်းမှ မရှိဘဲ နမာဇ် ဝတ်မပြုခဲ့မည်ဆိုလျှင် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်သခင် ချမှတ် မည့် ပြစ်ဒဏ် မထိုက်သူဖြစ်ပေမည်။
ဟဒီးစ်တော်အမှတ် (4)
)سَجْدَةُ الشُّكْرِ مِنْ اٴَلْزَمِ السُّنَنِ وَ اٴَوْجَبِهٰا فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعٰاءِ وَالتَّسْبِیْحِ بَعْدَ الْفَرٰائِضِ عَلَی الدُّعٰاءِ بِعَقیبِ النَّوٰافِلِ، كَفَضْلِ الْفَرٰائِضِ عَلَی النَّوٰافِلِ، وَ السَّجْدَةُ دُعٰاءُ وَ تَسْبِیحْ(
( စဂ်ျဒယေ ရှိုက်ရ် အရေးအကြီးတကာ အရေးအကြီးဆုံး ၊ ဝါဂျစ်ဗ်တကာ ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်သည့် မွတ်စ်သဟဗ်တော်များ မှ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ … ဧကန်မုချ ဝါဂျစ်ဗ် (နမာဇ်များ ) ပြီးနောက် ဒိုအာ နှင့် သက်စ်ဘီ ၏ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှု ၊နာဖေလာ နမာဇ် များ ပြီးနောက် ဒိုအာများ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှု ရှိ သလို ဖြစ်ပါသည်။ ဝါဂျစ်ဗ် နမာဇ်များသည် မွတ်စ်သဟဗ်နမာဇ်များ ထက် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ် သကဲ့သို့ စဂ်ျဒဟ်၊ ဒိုအာ နှင့် သက်စ်ဘီ သည်လည်း ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်လေ၏။ ) 
ဤဟဒီးစ်တော်သည် မိုဟမ္မဒ် ဗင် အဗ်ဒိုလ္လာဟ် ဟိုမိုင်ရီ ၏မေးခွန်းများကို အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (4) သခင်ဖြေထားသည့်အဖြေမှတစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ပါသည်။ဤဟဒီးစ်တော်တွင်ကိုယ်တော် (4) အနေဖြင့်အရေးကြီးမွတ်စ်သဟဗ်တော်များမှတစ်ခုဖြစ်သည့်တစ်နည်းအားဖြင့်စဂ်ျဒါယေရှိုက်ရ် ဘက်သို့ မိန့်ကြားတော်မူထားပါသည်။ ဝါဂျစ်ဗ်နမာဇ်များ ပြီး နောက် ဒိုအာ နှင့် သက်စ်ဘီ နှင့် စပ်လျဉ်း မိန့်ကြားပြီး ၊ ဤ (စဂ်ျဒါ ၊ ဒိုအာ ၊ သက်စ်ဘီ ) တို့ ၏ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ် မှုသည် ဝါဂျစ်ဗ်နမာဇ်များ သည် မွတ်စ်သဟဗ်နမာဇ်များထက် ကြီးကျယ် မြင့်မြတ် သကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူ စဂ်ျဒဟ် အစစ် နှင့် မြေကြီးအပေါ် နဖူးကို တင်၍ စဂ်ျဒါဟ်ပြုခြင်း ၏ စဝါးဗ် ကို ဒိုအာ နှင့် သက်စ်ဘီ ၏ စဝါးဗ် နှင့်အတူတူ သတ်မှတ်မိန့်ကြား ထား ပါသည်။
ကျမ်းတော် မြတ်ကုရ်အာန်၏ အာယသ်တော်များ ၊ ဟဒီးစ် တော်များကို လေ့လာ စိစစ်သုံးသပ်၍ ရရှိလာသည့် ရလာဒ် မှာ - ရှိသမျှ ဝါဂျစ်ဗ် အားလုံး နှင့် မွတ်စ်သဟဗ် အားလုံးသည် အတူတူ မဟုတ်ချေ။ သာဓက အားဖြင့် ဝါဂျစ်ဗ်များ အကြား နမာဇ် ၏ အရေးကြီးအလေးပါမှု မှာ အားလုံးထက် ပို၍ ပိုပါ သည်။ အကြောင်းမှာ - ကောင်းမှု ကုသိုလ်များ၏ သဘောတူ လက်ခံမှုသည် နမာဇ် ကို လက်ခံခြင်း နှင့် စပ်ဈဉ်းနေပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် ဤဟဒီးစ်တော်အရ မွတ်စ်သဟဗ်တော်များ အကြား စဂ်ျဒဟ်ယေရှိုက်ရ် ၏ အရေးပါ အရေးကြီးမှုမှာ အခြား မွတ်စ်သဟဗ်တော်များ ထက်ပိုမို၍ ကောင်းမြတ်ပါသည်။ စဂ်ျဒဟ်ယေရှိုက်ရ် သည် နေအ်မသ်တော်များ ကိုပို၍တိုး စေ သည် သော့ချက် ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ - အချိန်တိုင်း မနုဿ လူသား အနေဖြင့် နေအ်မသ် တော်ကို မြင်မည် (သို့) နေအ်မသ်တော်ကို ရရှိပြီး နောက် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သခင်အား ကျေးဇူးတင်မည်ဆိုလျှင် ၎င်း၏ နေအ်မသ်တော်သည် ကျန်နေမည်ဖြစ်ပြီး အခြား နေအ်မသ်တော်များကို လည်း ကျရောက် စေပါသည်။ ဤ ပွိုင့် အချက်ကို ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်တွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ မိန့်ကြား ထားပါသည်။
)لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاٴَزِیدَنَّكُمْ(
( အကယ်၍ အသင်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်(အလ္လာဟ်) အား ကျေးဇူး တင်ရှိ မည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်သည် (နေအ်မသ်တော်များတွင်) တိုးပွား ၊ပွားများမှုကို ထည့်ပေးတော်မူမည်။ ) 
အေမာမ် ဇမာန်း (4) အနေဖြင့် ဤဟဒီးစ်တော် အတွင်း အချို့ ပွိုင့်အချက်အလက်များ ဘက်သို့ အလင်းပြထားပါသည်။
၁။ စဂ်ျဒဟ်ယေ ရှိုက်ရ် ပြုရန် အတွက် မည်သည့် သီးသန့် အချိန် နှင့် မည်သည့် သီးသန့်နေရာ မှ မရှိချေ။ သို့သော် ဤ ဟဒီးစ် တော်ကို ဂရုပြုခြင်းဖြင့် သိရသည်မှာ - ဝါဂျစ်ဗ် နမာဇ်များ ၊ မွတ်စ်တဟဗ်နမာဇ်များ ပြီးနောက် ပြုလုပ် ခြင်းသည်အကောင်း တကာ အကောင်းဆုံး အချိန် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ စဂ်ျဒဟ်သည် မနုဿလူသား အတွက် ပြီးပြည့် စုံလင် မှုနှင့် မြတ်အလ္လာဟ်၏ ရှေ့မှောက်ဝယ် အလွန် တရာ နှိမ့်ချခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စဂ်ျပြုချိန် လူသား အနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို မမြင်တော့ ဘဲ ရှိသမျှ ဘုန်းနှင့် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ် မှု သည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် အတွက်သာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိလေ၏။ ( မြင်လေ၏။) ဤအတွက်ကြောင့် ဤအခြေအနေ (စဂ်ျဒဟ်) သည် အဖန်းဆင်းခံ မနုဿလူသား အတွက် အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး အခြေအနေ ဖြစ်ပါသည်။အထူးသဖြင့် မနုဿာ လူသား အနေဖြင့် နှုတ်နှင့်နှလုံးသားပေါင်းစပ်၍ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင်အား တမ်းတမည်၊ ၎င်းအား ကျေးဇူးတင် ( ရှိုက်ရ်) ပြု ချိန် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ဝါဂျစ်ဗ်နမာဇ်များ ပြီးနောက် ဒိုအာ နှင့် သက်စ်ဘီ ၏ စဝါးဗ် သည် မွတ်စ်သဟဗ်နမာဇ်များပြီးနောက် ဒိုအာ နှင့် သက်စ်ဘီထက် စဝါးဗ် ပို၍များပါသည်။ မွတ်စ်သဟဗ်နမာဇ် များ ထက် ဝါဂျစ်ဗ်နမာဇ်များ၏ ပို၍ကြီးကျယ် သကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ဟဇရသ် အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (4) မိန့်ထားသည့် စဂ်ျဒဟ်၊ ဒိုအာ ၊ သက်စ်ဘီ မိန့်မှာချက်ဖြင့်နားလည် သဘော ပေါက်ရ သည် မှာ - စဂ်ျဒဟ်ကိုယ်တိုင် ပင် လျှင် သက်စ်ဘီ နှင့် ဒိုအာ ၏ အမျိုး အစား တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ နမာဇ်ပြီးနောက် အလ္လာဟ် ဇေက်ရ် ပြုခြင်း သည် နှစ်မြို့ဖွင်လုပ်ရပ်နှင့် မွတ်စ် သဟဗ် အလုပ် ဖြစ်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းအတိုင်း စဂ်ျဒဟ် ပြုခြင်း သည် လည်းပဲ မွတ်စ်သဟဗ် ဖြစ်ပါသည်။အကြောင်းမှာ ဒိုအာ နှင့် သက်စ်ဘီ ၏ ရည်ရွယ်ချက် သည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ရှေ့မှောက်ဝယ် အလွတ်တရာ နှိမ့်ချခြင်း နှင့် ခယ ဝယလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။စဂ်ျဒဟ်ပြုခြင်းတွင်လည်းဤ ရည်ရွယ် ချက် အပြည့်အဝ ပါဝင်နေသည်မှာ သံသယ ဝင်စရာ မရှိချေ။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း (7) ၏ကဗဲရ်မြေ နှင့် ပြုထားသည့် သက်စ်ဘီ ၏ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှု
) مِنْ فَضْلِه اٴَنَّ الرَّجُلَ یَنْسیٰ التَّسْبیحَ وَیُدِیرُ السُّبْحَةَ فَیُكْتَبُ لَهُ التَّسْبِیحُ(
( (အေမာမ်ဟိုစိုင်း (7) ၏ကဗဲရ်မြေ) ၏ ကြီး ကျယ် မြင့်မြတ်မှု မှာဤသို့ ဖြစ်လေ၏။ ဤမြေနှင့်ပြုလုပ်ထားသည် သက်စ်ဘီ အားလက်တွင်ယူ၍ စိတ်နေမည်ဆိုလျှင် ၎င်း၏ စဝါးဗ် သည် သက်စ်ဘီ နှင့် ဇေက်ရ်၏ စဝါးဗ် ကိုရရှိမည် ဖြစ်ပါ သည်။ အကယ်၍ မည်သည့် ဒိုအာပင် မဖတ်ရွတ်ခြင်းနေ ပါစေ။ )
ဤ ဟဒီးစ်တော်သည် မိုဟမ္မဒ် ဗင် အဗ်ဒိုလ္လာဟ် ဟိုမိုင်ရီ၏ မေးခွန်း များကို အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (4) သခင်ဖြေထား သည့် အဖြေမှတစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ပါသည်။၎င်းအနေဖြင့်အေမာမ်ဇမာန်း (4) မေးလျှောက်ထားသည်မှာ - အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) ၏ကဗဲရ်မြေနှင့် သက်စ်ဘီ ပြုလုပ်လို့ ရပါသလား ? ၎င်းသက်စ်ဘီတွင် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှု တစ်ခုခုကော် ရှိပါ သလား ?
အေမာမ်ဇမာန်း (4) အနေဖြင့် မေးခွန်း အတွက် အဖြေ၏ အစပထမပိုင်းမိန့်ကြားတော်မူသည်။
( မိမိ၏သက်စ်ဘီကို အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) ၏ ကဗဲရ်မြေနှင့် ပြုလုပ်ပါလေ။ ၎င်းသက်စ်ဘီဖြင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင် အားတမ်းတ သတိရပါလေ။ အကြောင်းသည်ကား သက်စ်ဘီ လုပ်ရန် အတွက် အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) ၏ကဗဲရ်မြေ ထက် ကောင်း သည်အရာ မည်သည်အရာမျှ မရှိချေ။ ဤ မြေ ၏ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ် မှုများမှ တစ်ခုမှာ ဤသို့ဖြစ်လေ၏။ အကယ် ၍ အကြင် မည်သူမဆို ဇေက်ရ်ဖတ်ရန်မေ့သွားမည်၊ (ဤ) မြေ၏ သက်စ်ဘီ ကိုသာလျှင် မိမိလက်နှင့် စိတ်နေမည် (လှည့်နေမည်) ဆိုလျှင်လည်း ၎င်းအတွက် သက်စ်ဘီ နှင့်ဇေက်ရ်ဖတ် သည့် စဝါးဗ် ရေးမှတ်ပေးလေသည်။ )
အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) ၏ ကဗဲရ်မြေနှင့် ပြုလုပ်ထား သည် သက်စ်ဘီ ၏ ကြီးကျယ်မြင့်မျှုနှင့် စပ်လျဉ်းပြီးတိုက်သင့်သည့် ပွိုင့် နှစ်ခုဘက်သို့ မီးမောင်းထိုးပြပါမည်။
၁။အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) ၏ ကဗဲရ်မြေ သည်အလ္လာဟ်ဟို အရှင် မြတ် အနေဖြင့် မိုဘာရတ်က်(မင်္ဂလာ) ရှိသည့်မြေအဖြစ် သတ် မှတ် ထားသည့် မြေများမှ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်း မှာ - ဤ မြေကြီး၏ တစ်စိတ်တစ်နေရာတွင် ဟဇရသ် ဆရက်ဒ်ဒိုရ်ှရှို ဟဒါဟ် (7) ၏ သန့်စင်သန့်ပြန့် မွန်မြတ်လှသည့် ကိုယ်ခန္ဓာ အားမြှုပ်နှံထား သည့်အတွက် ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) ၏ ကဗဲရ်မြေနှင့် ပြုလုပ်ထား သည် သက်စ်ဘီ ၏ မွတ်စ်သဟဗ် ဖြစ်သည့် ကြီးမားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များမှ တစ်ခု မှာ - သက်စ်ဘီစိတ်သူ အကြင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) ၏ကဗဲရ်မြေနှင့် ပြုလုပ်ထား သည် သက်စ်ဘီ ကိုလက်တွင် ကိုင်ထားချိန်အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်၏ ရှေ့တော်ဝယ် အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) ၏ စတေးမှု ၊ ကုရ်ဗနီပေးမှု ကို သတိရစေပါသည်။ ပြီးနောက်ဤကဲ့သို့ လူသား တစ်ဦး သည် ယုံကြည်ချက်နှင့် မြတ်အလ္လာဟ်လမ်း အတွက် စတေး ခဲ့မှုနှင့် ဇွာလင်မ် များ နှင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့မှုကို ပါသိစေပါသည်။ မနုဿ လူသားသည် ဤလို အခြေအနေတွင် သန့်ရှင်း၊သန့်စင်၊သန့်ပြန့်သည့် ရူဟ် (ဝိဥာည်)များကို တမ်းတ သတိရ လေ၏။ (ထိုသန့်ရှင်း၊ သန့်စင်၊ သန့်ပြန့် သည့် ရူဟ် (ဝိညာဉ်) ) များသည် တကယ့်ချစ်မြတ်နိုးရသူ၏ လမ်း တွင် မိမိ၏ အသက်ကို စတေးခဲ့ပါသည်။မြတ်အလ္လာဟ်ဘက်သို့ ကြွရောက် သွား ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင် မနုဿ လူသား အတွက် ကျိုးနွံ နှိမ့်ချမှု ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်ပြီးနောက် ၎င်း၏ အမြင်တွင် လောကကြီး နှင့်လောကအတွင်းရှိသမျှ သည် သေး ငယ်သွားလေ၏။ (အထင်ကြီး ၊ စွဲမက်စရာ မရှိ ချေတော့ ချေ။) ပြီးနောက် ၎င်း၏ နဖ်စ် အတွင်း အေရ်ဖန်နီအခြေအနေ နှင့် နမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထူးသီးသန့် အခြေအနေကို ဖြစ်စေ ပါသည်။ ဤအခြေအနေသည် အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) ၏ ကဗဲရ်တော် မြေ နှင့် သဝစိုလ် ကြောင့် ဖြစ်ပါ သည်။ ဤအတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ဟဒီးစ် တော်များ တွင် ဖတ်ရသည်မှာ - အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) ၏ကဗဲရ်တော် မြေ အပေါ် (အလ္လာဟ်အတွက် ) စဂ်ျဒဟ် ပြုခြင်း ဖြင့် အကွယ် ၇လွှာ ဖယ်သွားလေ၏။
၂။ အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) ၏ကဗဲရ်တော် မြေ နှင့် ပြုလုပ် ထား သည့် သက်စ်ဘီ ၏ အကျိုးအာနိသင်များ မှ တစ်ခု မှာ - (အဲဟ် လေ့ဘိုက် (အ.စ) အနေဖြင့်လည်း အမြဲ လူထုကို မိန့် ကြား ပါသည်။ ) အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) ၏ မဇွာလူးမီယသ် ( မတရား၊ ရက်စက်ယုတ်မာ ၊ ညှင်းပန်း၊သတ်ဖြတ်ခံရမှု ) လူထုအား သိ အောင် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြသစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ - နမာဇ် အမြဲ ဝတ်ပြု သူသည် နမာဇ် တိုင်း အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) ၏ ကဗဲရ် တော် မြေ နှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် သက်စ်ဘီ ကို အသုံးပြုချိန် ၎င်းအနေဖြင့် ကိုယ်တော် အေမာမ် ဟိုစိုင်း(7) ကဗဲရ်တော် ၏ မြေ ကိုမြင်ရချိန်တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်း (7) ၊ကိုယ်တော် ၏ သာဝကတော်များ ၊ ကိုယ်တော်၏ အိမ်တော်သူ ၊အိမ်တော် သားများ ကုရ်ဗနီပေးမှု ၊ စတေးခံခဲ့ပုံကို တမ်းတပေမည်။ သိရှိကြသည်မှာ လည်း - ဤကဲ့သို့သော် စံနမူနာများကို တမ်း တာခြင်းသည် စိတ်ပညာအရ မနုဿလူသား၏ နဖ်စ် အတွင်း အံ့သြဖွယ် သွန်သင်ဆုံးမမှု၏အာနိသင် ၊ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာနိ သင် ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ မနုဿလူသားကို ဟိုစိုင်းနီ (အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) နောက်လိုက်သူအစစ် ) ဖြစ်စေပါသည်။ လူသား၏ တည်ရှိနေမှု တွင် ဟိုစိုင်းနီတော်လှန် ၏ ဝိညာဉ် နှင့် သွေးများလှုပ်ရှား လာပေသည်။
လူများ၏ လိုအင်ဆန္ဒကို ဖြည့်စီး ပေးခြင်း
) مَنْ كٰانَ في حٰاجَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كٰانَ اللهُ فِي حٰاجَتِهِ(
( အကြင် မည်သူမဆို အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏ လိုအင် ဆန္ဒ ကိုဖြည့်စီး ပေးနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းမည်ဆိုလျှင် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သည်လည်း ၎င်း၏ လိုအင်ဆန္ဒ ကိုဖြည့် စီးပေး သနား တော်မူမည်။ ) 
ဤဟဒီးစ်တော်အား ရှိက်္ခ ဆဒူက်(ရ.ဟ) အနေဖြင့် မိမိ၏ ဖခမည်း တော်ထံမှ၎င်း ၊ ၎င်းအနေဖြင့် စအ်ဒ်ဗင် အဗ်ဒိုလ္လာဟ် ထံမှ၎င်း၊ ၎င်းအနေဖြင့် အဘေလ်ကာစင်ဗင်အဘီ ဟလီးစ် (ဟာဗတ်စ်) ထံမှ၎င်း ၊၎င်း အနေဖြင့် အေမာမ် ဇမာန်း (4) ထံတော်မှ ၎င်း ဆင့်ပြန်ထားပါသည်။ အေမာမ် (4) အနေဖြင့် ဟလီးစ်စီ ၏ ခိုလိုစ် နှင့် ခြုံ၍ ဤ စာရိတ္တဆိုင်ရာ ပွိုင့် ဘက်သို့ ညွှန်း၍မိန့်တော်မူသည်။ (အကြင် မည်သူမဆို အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏ လိုအင်ဆန္ဒ ကိုဖြည့်စီး ပေးနိုင်အောင် ကြိုးပမ်း မည်ဆိုလျှင် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သည်လည်း ၎င်း၏ လိုအင် ဆန္ဒ ကိုဖြည့် စီးပေး သနား တော်မူမည်။ )
သို့သော်လည်းပဲ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သခင်၏ လိုအင် ဆန္ဒ ဆိုသည်ကို ဤ ဟဒီစ်တော်၏ အခြား အပိုင်းတွင် အေမာမ် ဟိုစိုင်း ( 7) ၏ဇေယာရသ် အား ခိုလိုစ်နီယသ် နှင့် ဖတ်ရွတ် ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ် ဖော်ပြထားပါသည်။သို့သော် အေမာမ် ဇမာန်း (4) အနေဖြင့် ယေဘုယျနီယာမ တစ်ခု ကိုသာ မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် အေမာမ် ဟိုစိုင်း ( 7) ၏ဇေယာရသ် ကိုလည်း ဤဟဒီးစ်တော်၏ ဆိုလိုချက် တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပာယ် မှာ - အကယ်၍ မနုဿ လူသားအနေဖြင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင် လိုလားသည့် နှစ်သက် နှစ်မြို့ သည့် အလုပ် တစ်ခုခုကို ပြုလုပ် ခြင်းကို (အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်၏ လိုအင်ဆန္ဒ ၊ လိုလားနှစ်မြို့ မှု ) ခေါ်ဆိုပါသည်။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင် သည်လည်း မနုဿလူသား၏ အလုပ်များကို ပြုပြင် တည်း မတ် ပေးတော်မူပါသည်။
အသိပေး ဖော်ပြရန် သင့်တော်ပါသည် ။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်သည် မည်သည့်အရာ ကိုမျှ လိုလား တောင်းတ ခြင်း မရှိချေ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဂဇီယိုဟာဂျာသ် (လိုအင်ဆန္ဒများကို ဖြည့်စီးပေးသည့်အရှင် ) အဖန်းဆင်းခံ အား လုံး ခြေမှခေါင်းအထိ (အစအဆုံး ) ၎င်း အား လိုလား တောင့် တရ ပါသည်။
)یَااٴَیُّهَا النَّاسُ اٴَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ(
( အို လူသားအပေါင်းတို့ ၊အသင်တို့ အားလုံးသည် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင် ဘက်သို့ လိုလား တောင့် တရ ကြရပါသည်။ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင်သည် ကြွယ်ဝချမ်းသာ သည့်အရှင် နှင့် ချီးမွမ်း ထိုက်တော်မူသည်သည့် အရှင် ဖြစ်ပါသည်။ ) 
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ လိုအင်ဆန္ဒ ဆိုသည့် စကား ပြန်ချက် ကို ဤဟဒီးစ်တော်မှ ညွှန်းပြ နေပါသည်။ အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ လိုအင်ဆန္ဒ သည် အဖန်ဆင်းခံ ၏ လိုအင် ဆန္ဒ တွင် ရှိပါသည်။ အခြား စကားလုံးများ ဖြင့် ပြော ရမည်ဆိုလျှင် အကြင်မည်သူမဆို လူထု၏ လိုအင်ဆန္ဒ ကို ဖြည့် စီးပေးခြင်းသည် တစ်နည်းအားဖြင့် အလ္လာဟ် ဟို အရှင် မြတ်၏ လိုအင်ဆန္ဒ ကို ဖြည့် စီးပေးခြင်းမည်ပေသည်။
ဤဟဒီးစ်တော်၏ အခြားဖြစ်နိုင်ခြေလည်း ရှိပါသည်။ အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သခင်၏ လိုအင်ဆန္ဒ ဆိုသည်မှာ အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ အမိန့်ပညတ်တော် စည်းမျည်း ဥပဒေ များ ဖြစ်ပါသည်။ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင် လိုလားသည့် ဆောင်ရန်နှင့် ရှောင်ရန်အမိန့် ဥပဒေ များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ အကယ်၍ အကြင်မည်သူမဆို အလ္လာဟ် ဟုအရှင်မြတ် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်၏ အမိန့် တော်များ ကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးမည်ဆိုလျှင် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သည်လည်း ၎င်း ၏ လိုအင် ဆန္ဒကို ဖြည့် စွက် ပေး သနား တော်မူပေမည်။
အက်္စသက်ဖါရ် ၊ ခွင့်လွတ်ပလပ်ခြင်း အတွက် အကြောင်းခံ
)إِذٰا اسْتَغْفَرْتَ اللهَ، فَاللهُ یَغْفِرُ لَكَ(
( အကယ်၍ အသင်အနေဖြင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ထံ တော်ဝယ်အက်္စသက်ဖါရ် ပြုမည်ဆိုလျှင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သခင်သည်လည်း အသင်ကို ခွင့်လွတ် ပလပ်တော်မူမည်။ ) 
ရှိက်္ခကိုလိုင်းနီ ( ရ.ဟ)အနေဖြင့် ဤဟဒီးစ်တော် အား အေမာမ်ဇမာန်း(4) ၏ ဟဒီးစ်တော်များ အတွင်း ဆင့်ပြန် ထား ပါသည်။ ဟဒီးစ်တော်၏ အနှစ်ချုပ်မှာ ဤသို့ဖြစ်လေ၏။ ယမါနီ အမည်ရှိပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးသည် စာမရာမြို့ သို့ရောက်ရှိလာသည်။ အေမာမ်ဇမာန်း(4) ဘက်မှ ၎င်းအတွက်အိတ်တစ်လုံး ထိုအိတ် အတွင်း ဒီနာ ၂ပြား နှင့် အဝတ် ၂ ထည် ပါလေ၏ ၎င်းထံရောက် လာ၏။ ၎င်းအနေဖြင့် သေးငယ်သည့်လက်ဆောင်အဖြစ် သတ် မှတ် ၍ပယ်ချခဲ့လေ၏။ သို့သော် ကာလအနည်း ငယ် ကြာပြီး နောက် မိမိ၏ ဤလုပ်ရပ်အပေါ် နောင်တ ရလေသည်။ စာ တစ် စောင်ရေးသားလေ၏။ (စာဖြင့်) တောင်းပန်မှုပြုလေ၏ ။နှလုံး သည်းပွတ်ဖြင့် သောင်ဗာ ပြုလုပ်ပြီး အကယ်၍ နောက်တစ်ကြိမ် ဤကဲ့သို့ လက်ဆောင်ရမည်ဆိုလျှင် ၎င်းလက်ဆောင်ကို လက် ခံမည် ဟု နီယသ်ပြုလေ၏။ ကာလအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် ၎င်းထံလက်ဆောင် တစ်ခု ရောက် လာလေ ၏။ (အေမာမ် ၏အဖြေ) စာအတွင်း အေ မာမ် ဇမာန်း (4) အနေဖြင့် ယမါနီ အား ညွှန်း ၍ မိန့် တော် မူ လေ၏။
( အသင်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ် ၏လက်ဆောင်ကိုပယ်ချပြီး အမှား လုပ်ခဲ့လေ၏။ အကယ်၍ အသင်အနေဖြင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင် မြတ် ထံ တော်ဝယ်အက်္စသက်ဖါရ်ပြုမည်ဆိုလျှင်အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင်သည်လည်း အသင်ကို ခွင့်လွတ် ပလပ် တော် မူမည်။)
ဤ (အေမာမ်၏အဖြေ) စာတွင် ပွိုင့် ၂ ခု ဘက်သို့ ညွှန်းပြ နေပါသည်။
၁။ အေမာမ်ဇမာန်း (4) လှိူ့ဝှက် ဖုံးကွယ်နေသည့် စကားများ ကို သိရှိတော်မူသည်။ လုပ်ရပ်များ ယုတ်စွ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ နီယသ် များကို သိရှိတော်မူသည်။ဤအတွက်ကြောင့် အေမာမ် ဂျာအ်ဖရ် ဆွာဒစ် (7) အနေဖြင့် ရီဝါယသ်တော်တစ်ခုတွင် အောက် ဖော် ပြပါ အာယသ်တော်-
)قُلْ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ(
(တမန်တော်မြတ် (6) ပြောကြားပါလေ။ အသင်တို့ (လုပ်ချင် တာ) လုပ်ပါလေ။ မကြာမီ အလ္လာဟ်ဟို အရှင် မြတ် ၊ ၎င်း၏ တမန်တော် နှင့် မိုအ်မင်များသည် အသင်တို့၏ လုပ်ရပ်ကိုကြည့် နေပါသည်။)
မိုအ်မင်များဆိုသည်မှာ အေမာမ်များ (၁၂ပါး ) ဖြစ်ပါသည်။ 
၂။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ထံ တော်ဝယ်အက်္စသက်ဖါရ် ပြုခြင်း သည် ဂိုနာ(အပြစ်များ) ကို ခွင့်လွတ်ပလပ် တော်မူရန် အတွက် အကြောင်းခံ ကို ဖြစ်စေပါသည်။ အက်္စသက်ဖါရ် ပြုခြင်းသည် နှလုံးသား နှင့် ဆိုင်သည့် အမိန့်တစ်ခု ဖြစ်၍ စကားစုများ မလို အပ်ချေ။ ဟဒီးစ်တော်မှ ဤကဲ့သို့ အကျိုး ရယူနိုင်ပါသည်။ အက်္စသက်ဖါရ်(နောင်တ၊နောက်တစ်ချုပ် အပြစ်ထပ်၍မလုပ်မည် ဆိုသည့် ကတိပြုချက်နှင့်အတူ ) ပြုခြင်းသည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်ဘက်မှ အပြစ်များမှ ခွင့်လွတ် ပလပ်မှု ရရန် နှင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်လက်ခံမည့် သောင်ဗာ အတွက် လုံလောက်ပေသည်။ သို့သော် ပြီးပြည့်စုံသည့် သောင်ဗာ တစ်ခုဖြစ်ရန် အတွက်အချို့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ပညတ်ချက် များ ရှိပါသည်။ ၎င်း ဘက်သို့ ဟဇရသ်အမီးရွလ်မိုအ်မေနီ မောင်လာအလီ (7) အနေဖြင့် ဟဒီးစ်တော် တစ်ခုတွင် ညွှန်း၍ မိန့်တော်မူထားပါသည်။ 
တစ်ယောက်မှ အခြားတစ်ယောက်အတွက် အက်္စသက်ဖါရ်ပြု ပေးခြင်း
) لَوْلاٰ اسْتِغْفٰارُ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ لَهَلَكَ مَنْ عَلَیْهٰا(
( အကယ်၍ အသင်တို့ အတွင်းတစ်ယောက်မှ အခြား တစ် ယောက်အတွက် အက်္စသက်ဖါရ်ပြု ပေးခြင်း မရှိမည် ဆိုလျှင် မြေကြီးပေါ် အသက်ရှင်နေသူ လူသားအားလုံး သေကျေ ပျက်စီး သွား မည် ဖြစ်ပါသည်။) 
အေမာမ်ဇမာန်း (4) အနေဖြင့် မဟဲဇ်ယာရ၏ သားအား မိန့်ကြားသည့် ရှည်လျားသည့် ဟဒီးစ်တော် တစ်ပါးတွင် မိမိ ရှီအာမွတ်စလင်မ်များကို တစ်ယောက်မှ အခြား တစ် ယောက် အတွက် အက်္စသက်ဖါရ်ပြု ပေးခြင်း နှင့် ဒိုအာပြုပေး ပြုရန် တိုက် တွန်းမိန့်ကြားထားပါသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်း အလုပ်၏ အကျိုးအနိသင် နှင့် ဘရ်ကသ်များမှာ မြေကြီး နှင့် မြေကြီး အပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်သူများ ကို အလ္လာဟ်ဟို အရှင် မြတ် ၏ အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်း (အဇါဗ်) မှ ကာကွယ် ပေး ခြင်းဖြစ် ပါသည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ အာယသ်တော်များကို အသုံးပြု ၍သိရှိရမည်မှာ - ဤလောကကြီးတွင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်း (အဇါဗ်) မှလုံခြုံစေမည့် အကြောင်းခံ ၂ခု ရှိပါသည်။
၁။ မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ်(6) ၏ တည်ရှိနေမှု ၊ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင် မိန့်တော်မူသည်။
)مٰا كٰانَ اللهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَاٴَنْتَ فِیْهِمْ(
(အသင် သည် ၎င်းတို့အကြား ရှိနေသ၍ လုံးဝမုချ ၎င်းတို့ အပေါ်အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်ဘက်မှ ပြစ်ဒဏ် ချတော် မူမည် မဟုတ်ချေ။ )
၂။ အက်္စသက်ဖါရ်ပြုခြင်း၊ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သခင် မိန့် တော်မူသည်။
)مٰا كٰانَ اللهُ لِیُعَذِّبَهُمَْ وهُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ(
(အပေါ်အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သည် ၎င်းတို့အပေါ် သောင်ဗာ နှင့် အက်္စသက်ဖါရ်ပြု နေသ၍ လုံးဝ ပြစ်ဒဏ် ချတော်မူမည် မဟုတ်ချေ။)
ဤဟဒီးစ်တော်မှလည်း ပွိုင့် ၂ ခုကို သိရှိ အကျိုးယူနိုင်ပါသည်။
(က) ဂိုနာ(အပြစ်ဒုစရိုက် ) သည် ဤလောက တွင် သေကျေ ပျက်စီးခြင်း နှင့် ပြစ်ဒဏ်ကျရောက် မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။
(ခ) အက်္စသက်ဖါရ်ပြုခြင်း သည် ခွင့်လွတ်ပလပ်မှုကို ဖြစ်စေ ပါ သည်။ အထူးသဖြင့် တစ်ယောက်မှ အခြား တစ် ယောက် အတွက် အက်္စသက်ဖါရ်ပြု ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
) اٴَمّٰا وَجْهُ الْاِنْتِفٰاعِ بِي فِي غَیْبَتِي فَكَالْاِنْتِفٰاعِ بِالشَّمْسِ إِذٰا غَیَّبَتْهٰا عَنِ الْاٴَبْصٰارِ السَّحٰابُ(
ဤအေမာမ် ဇမာန်း (4) စကားသည် ကိုယ်တော်အနေဖြင့် အစ်္စဟက် အေဗ်နေ ယအ်ကူဗ် ကိုအဖြေပေး မိန့်ကြားတော်မူ သည် ဟဒီးစ်တော်၏ နောက်ဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ရှိက်္ခ စဒူက် (ရ.ဟ) နှင့် ရှိက်္ခ သူစီ (ရ.ဟ) အနေဖြင့်လည်း ဤ ဟဒီးစ် တော် အား ဆင့်ပြန်ထားပါသည်။ ဤမြင့်မြတ်သည့် ဟဒီးစ်တော် တွင် အေမာမ် ဇမာန်း (4) ၏ ဂိုက်ဗသ်သေ ကိုဗ်ရာ ကို မိုးတမ်များ၏နောက်တွင်ကွယ်နေသည့်သူရိယနေမင်းနှင့်ပမာပေးထားပါသည်။
ဤပမာပေးမှုတွင် အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး ပွိုင့်များ ပါဝင်နေပါသည်။ ၎င်းပွိုင့်များ မှ အချို့ ကို ညွှန်းပြပါမည်။
၁။ အေမာမ်မဲဟ်ဒီ (4) သည် မိမိကိုယ် မိမိ သူရိယ နေမင်း နှင့်ပမာ ပေးထားပါသည်။ သူရိယနေမင်းသည် သက်ရှိ သတ္တဝါ များအတွက် သက်ရှင်ရန်ရေ နှင့် အလင်းရောင် နှင့်အပူ ဓာတ် စသည်တို့ကို ဖန်တီးပေးသကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။ သူရိယ နေမင်း မရှိသည့် အခြေအနေတွင် သက်ရှိ သတ္တဝါအားလုံး ၏ဘဝ ချုပ်ငြိမ်း သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်း အတိုင်း လူ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း ၏ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘဝနှင့် ၎င်းဘဝတည်မြဲဖို့ ရန် အေမာမ် ဇမာန်း (4) ၏ တည်ရှိနေမှု နှင့် ဆက်နွယ်နေပါသည်။ အချို့အစ္စလာမ်မီ ရီဝါယသ် တော်များ တွင် တင်ပြထားပါသည်။ အေမာမ်များ (၁၂ပါး) (:) သည် ဝေနေယျ သတ္တဝါ အပေါင်း အဖန်ဆင်းခံရဖို့အတွက် အဓိက ပင်းမ အကြောင်း ခံ ရည်ရွယ်ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။
၂။ သူရိယနေမင်းသည် အဖန်ဆင်းခံများမှ အဖန်ဆင်းခံ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး သက်ရှိ သတ္တဝါများ အတွက် အလင်းရောင်နှင့် အပူ ဓာတ်ကို ပေးစွမ်း ရန် အကြောင်းခံ အဆက်အသွယ်ဖြစ် သကဲ့ သို့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ အေမာမ် (4) ၏ တည်ရှိနေမှု သည်လည်း အဖန်ဆင်းခံများ အကျိုးအမြတ် ရယူရန် အတွက် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သည့် အကြောင်းခံ အဆက်အသွယ် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင် ပေးသနားသည့် အကျိုးအမြတ် ဥပမာ နေအ်မသ် နှင့် ဟေဒါယသ် စသည်ဖြင့် တို့သည် ဤ အကြောင်းခံ အဆက်အသွယ်ကြောင့် အဖန်ဆင်းခံ များ အထိ ရောက်ရှိ လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၃။ လူသားများအနေဖြင့်အကျိုးအမြတ် ပြည့်အဝ ခံစားနိုင်ဖို့ မိုးတိမ်အနောက်တွင် ကွယ်နေသည့် သူရိယ နေမင်း ထွက်လာ မည်ကိုမျှော်လင့် စောင့်စား သကဲ့သို့ အေမာမ် ဇမာန်း (4) ၏ဂိုက်ဗသ် ကာလတွင် လည်း မိုအ်မင်များ သည်လည်း ကိုယ် တော် ဖူးပွင့်လာမည်ကို မျှော်လင့် စောင့်စား နေကြပါ သည်။ ကိုယ်တော် ဖူးပွင့်မည့်ကိစ္စ အတွက်မျှော်လင့်ချက် မကင်း မဲ့ ကြပေ။
၄။ အေမာမ် ဇမာန်း (4) ၏ တည်ရှိနေမှုကို ငြင်းပယ်သူသည် မိုးတိမ်နောက်ကွယ်တွင်ရှိနေသည့် သူရိယနေမင်းကို ငြင်းပယ် သကဲ့ သို့ ဖြစ်ပါသည်။
၅။မိုးတိမ်များသည် သူရိယနေမင်းကို လုံးဝကွယ် ထားသည် မဟုတ်ချေ။၊ သူရိယနေမင်း၏ အလင်းရောင်နှင့် အပူဓာတ်သည် မြေကြီး နှင့်မြေကြီးပေါ်ရှိ သူများ ထံသို့ရောက်ရှိပါသည်။ ဤ နည်းတူစွာ ဂိုက်ဗသ် ကာလတွင်လည်း အေမာမ် ဇမာန်း (4) ထံတော်မှ အကျိုးအမြတ်ရယူမှုတွင် အပြည့်အဝ အတားအဆီး မရှိချေ။ လူသားများ (မိုအ်မေနီ) အနေဖြင့် ဂိုက်ဗသ်ကာလတွင် အေမာမ် ဇမာန်း (4) ကို မမြင်ကြပေ။ သို့သော်ကိုယ်တော် ၏တည်ရှိနေမှု မှ အကျိုးအမြတ် ရယူနေပါသည်။ သဝစိုလ် ပြုခြင်းသည် ကိုယ်တော်ထံမှ အကျိုးအမြတ် ရယူနိုင်သည့် လမ်း များ မှ တစ်နည်းဖြစ်ပါသည်။
၆။ အချို့နေရာဒေသများတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် မိုးတိမ်များ အုံ့နေတတ်ပါသည်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ခါ သူရိယနေမင်းသည် မိုးတိမ်များကို ထိုးဖောက်ပြီး ၎င်းတို့အကြားထွက်လာပါသည်။ လူအချို့လည်း မြင်တွေရပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ အချို့ လူသားများ (မိုအ်မင်များ ) သည်လည်း အေမာမ်ဇမာန်း (4) ထံတော်ဝယ်ခစားရပါသည်။ ကိုယ်တော်၏ တည်ရှိနေမှု မှ (တိုက်ရိုက်) အကျိုးအမြတ် ရယူပါသည်။ ဤနည်းလမ်း ဖြင့် အေမာမ် ဇမာန်း (4) တည်ရှိနေမှု သည် လူသားအများ စု အတွက် သက်သေပြပြီးသာ ဖြစ်သွားပါသည်။
၇။ သူရိယနေမင်းထံမှ အကျိုးအမြတ်ကို သာသာသာသနာ ရှိသူဖြစ်စေ ၊ဘာသာသာသနာမရှိသူဖြစ်စေ အကျိုးအမြတ် ရယူသကဲ့သို့ အေမာမ်ဇမာန်း (4) ၏ တည်ရှိနေမှုအကျိုး အာနိ သင်များ ၊ ဘရ်ကသ်(မင်္ဂလာတော်) များ သည်လည်း လောကီ တစ်ခွင်လုံး အတွက် ဖြစ်စေပါသည်။ သို့သော်လည်း လူသားများသည် ကိုယ်တော်ကို မသိရှိကြချေ။ ကိုယ်တော်၏ တန်ဖိုး ကိုနားမည်ကြချေ။
၈။ သူရိယနေမင်း၏ ရောင်ခြည် များသည် တံခါးပေါက်များ ပြူတင်း ပေါက်များ၏ ပမာဏ နှင့်အညီ အခန်းတွင်း သို့ ရောက် ရှိပါသည်။လူသားများအနေဖြင့် ထိုပမာဏ အတိုင်းအတာ အတိုင်း အကျိုးအမြတ် ရယူကြပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ အေမာမ် ဇမာန်း (4) ၏တည်ရှိနေမှု ၏ ဘရ်ကသ် (မင်္ဂလာ တော်) များ မှအကျိုးအမြတ်ရယူမှုသည်လည်း မနုဿလူသား၏စွမ်းအား နှင့် အရည် အချင်း အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ မနုဿလူသားအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုပရ်ဒါများ(အတားအဆီးအကွယ်များ)နှင့်ဝေအောင်ပြု လုပ်လေ၊ မိမိ၏ နှလုံးသားကို ကျယ်သထက်ကျယ်အောင် ပြုလုပ်လေ၊ထိုပမာဏအတိုင်း ကိုယ်တော် ၏ တည်ရှိမှု ၏ ဘရ်ကသ် (မင်္ဂလာ တော်) များ မှအကျိုးအမြတ်ရယူနိုင်လေ ဖြစ်ပါသည်။
၉။ မိုးတိမ်သည် သူရိယနေမင်းကို မပျက်စီးနိုင်ချေ။ သီးသန့် သူရိယ နေမင်း ကိုမမြင်ရအောင်သာ အတား အဆီး ပြုနိုင်ပါ သည်။ ထိုနည်းတူစွာ အေမာမ် ဇမာန်း (အ.ဂျ) ၏ ဂိုက်ဗသ် သည် လည်း သီးသန့် ကိုယ်တော်ကိုမမြင်ရအောင် သာ တားဆီး ထားပါသည်။
အေမာမ် (4) ဖူးပွင့်ရန် အတွက် နောက်ကျရသည့်အကြောင်း
) وَلَوْ اٴَنَّ اٴشْیٰاعَنٰا (وَ فَّقَهُمُ اللهُ لِطٰاعَتِهِ) عَلَی اجْتِمٰاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفٰاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ لَمٰا تَاٴَخَّرَ عَنْهُمُ الْیُمْنَ بِلِقٰائِنٰا، وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعٰادَةُ بِمُشٰاهَدَتِنٰا عَلیٰ حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَ صِدْقِهٰا مِنْهُمْ بِنٰا، فَمٰا یَحْبِسُنٰا عَنْهُمْ إِلاّٰ مٰا یَتَّصِلُ بِنٰا مِمّٰا نَكْرَهُهُ وَلاٰ نُوٴْثِرُهُ مِنْهُمْ(
( အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ ရှီအာ ( အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သခင် ၎င်းတို့ကို အမိန့်နားခံကျင့်သုံးနိုင်စွမ်းပေးသနားတော်မူပါစေ) မိမိတို့ ၏ ကတိကဝတ် ကို တည်ဖို့ကြိုးပမ်း မှုတွင် ကိုယ်ချင်း စာ တရား၊ဂရုဏာရှိမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်နှင့် တွေ့ဆုံရန နောက် ကျမည် မဟုတ်ချေ။ ကျွန်ုပ် အား ဖူးတွေ့ရန် အတွက် အောင် မြင်မှု သည် အလျင် အမြန် ဖူးစားကံဖြစ် မှာဖြစ်ပါသည်။ မအ်ရေဖသ်အစစ်အမှန် နှင့် ကျွန်ုပ်ဘက်သို့ ဖြောင့်မတ် မှန်ကန် မှုကို ဖြစ်စေသည့် ဘာသာ တရားလိုက်စားခြင်း ၊ ကျွန်ုပ် ဖုံးကွယ်နေရခြင်း ၏ အကြောင်း ခံမှာ ကျွန်ုပ်ထံရောက်လာသည့် လုပ်ရပ်များ မှအပ အခြား မည် သည့် အရာမှ မရှိချေ။ တစ်ကယ် တော့ ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းတို့ထံ ဤ ကဲ့သို့ အလုပ်များ မမျှော် လင့်ပေ။ ) 
ဤ စကားစုများသည် အေမာမ် ဇမာန်း (4) မှ ရှိက်္ခမိုဖီးဒ် (ရ.ဟ) ထံသို့ ပေးပို့သည့် စာချွန် ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ အေမာမ် ဇမာန်း (4) အနေဖြင့် ဤ စာချွန်တွင် ရှိက်္ခမိုဖီးဒ် (ရ.ဟ) ကိုအရေးကြီး မှာကြားစရာများ မှာကြားပြီးနောက် မိမိ ရှီအာ များ အတွက် ဥပဒေပညတ်တော်များ ကိုတင်ပြပြီး ဂိုက် ဗသ် ဖြစ်ရသည့် အရေးကြီး အကြောင်းခံ ကို ညွှန်းပြ တော်မူ ၏။ ကိုယ်တော် (4) အနေဖြင့် ရှီအာများအကြား ခိုလုစ် (အလ္လာဟ် အရှင်မြတ် နှစ်မြို့မှု အတွက်သာ လုပ်ခြင်း ) နှင့် ကိုယ်ချင်း စာတရား၊ဂရုဏာ မရှိခြင်းတို့ကို မိမိ၏ ဂိုက်ဗသ် ၏ အကြောင်း ခံ ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားလေ၏။
သမိုင်းကဖော်ပြနေသည်မှာ လူထု အနေဖြင့် မလိုလား မည်၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု မရှိမည်ဆိုလျှင် အမှန်တရားသည် မိမိနေရာ မှန်တွင် ရပ်တည်၍ မနေနိုင်ချေ။ အချုပ်အခြာ အာဏာသည် တိုက်တန်သည် လက်သို့ရောက်မည်မဟုတ်ပေ။ ဟဇရသ် မောင်လာ အလီ (7) ၊အေမာမ်ဟစန် (7) ၊ အေမာမ် ဟိုစိုင်း (7) တို့၏ အတွေ့အကြုံများ သည် ဤဆိုလိုချက် အတွက် အလွန်ထင်ရှား ပြတ် သားသည့် သက်သေ အထောက် အထား များဖြစ် ပါ သည်။ အကယ်၍ လူထုအနေဖြင့် ဟဇရသ် မောင်လာ အလီ (7) ခေလာဖသ်အပေါ် ဇွဲကောင်းကောင်းနှင့် ရှိခဲ့ မည်ဆိုလျှင် ယနေ့ သမိုင်း လမ်းကြောင်း တခြား လမ်း ကြောင်း ဖြစ်ပေမည်။ သို့သော် ထိုခေတ်ကာလက လူထုတွင် လောကီတပ်မက်မှု ၊ အကြောက်အလန်စသည်ဖြင့် ရှိနေသည့် အတွက် ကြောင့် လောကီသားများကို အထူးသဖြင့်ရှီအာများကို ရက်စက် ညှဉ်းပန်း ယုတ်မာ မှု အမြဲခံနေရ သည် အကြောင်း ခံဖြစ်ခဲ့ရသည် မှ အပ အခြား မမြင်ရတော့ချေ။ ဝမ်း နည်း စရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ မအောင်မြင်ခြင်း တာဝန်ပေါ့ လျော့ခြင်း နှင့် တစ်နည်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မကောင်း သည့် လုပ်ရပ် များ ကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပြီး ယနေ့တိုင် ရှိနေပါ သည်။
ဤဟဒီးစ်တော်အရ အေမာမ်ဇမာန်း (4) အမြန်ဆုံးဖူး ပွင့်လာ ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားမှာ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တော်အား မိမိနှင့်မိမိ၏ ဆွေးမျိုးသားချင်းများထက်ပိုမို၍ အလေး ထား ဦးစားပေရမည်။အစ္စလာမ် ဥပဒေ ပညတ်တော် များကို လက်တွေ့ အကောင် အထည်ဖော်ရပေမည်။ အစ္စလာမ်မီ သဗ်လီးဂ် (စစ်မှန်သည့် အစ္စလာမ်အတွက် ဖိတ်ခေါ်မှုများ၊ သာသနာ ပြုခြင်းများ ) ၏ အကူအညီ ဖြင့်လောကသားများကို အေမာမ် (4) ၏ အကြောင်း သိအောင် လုပ်ပေးရပါမည်။ နှလုံး သားများကို အေမာမ် (4) ဘက်သို့ ဂရုပြု အောင် ပြုရ မည်။ ထိုမှသာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ၏ နှစ်မြို့လိုလား မှုဖြင့် အလျင် အမြန် လူထု အတွင်း အေမာမ် ဇမာန်း (4) ကို လက်ခံ လာအောင် လမ်းကြောင်း ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤ မြင့်မြတ်သည့် ဟဒီးစ်တော်ဖြင့် အချို့ ပွိုင့်များကို သိရှိ နိုင်ပါသည်။
၁။ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် အေမာမ် များ (:) ၏ အမိန့်ကို နာခံကျင့်သုံးရန် ရှီအာများထံမှ ကတိ ကဝတ် ယူ ထားပါသည်။ဤနာခံကျင့်သုံးမှုသည် အေမာမ်ဇမာန်း (4) နှင့် တွေ့ ဆုံရန်အတွက် အကြောင်းခံ ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ရှီအာများ၏ မကောင်းသည့် လုပ်ရပ်များသည် မိမိတို့၏ အေမာမ် ဇမာန်း (4) နှင့်ဝေးရသည့်အကြောင်းခံကို ဖြစ်စေ ပါ သည်။ ဤအတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကောင်းမြတ် သည့် အလုပ်များ (သင့်လျှော်သည့်လုပ်ရပ်များ ) သည် အေမာမ် ဇမာန်း (4) နှင့်အလျင်အမြန် ဆက်သွယ်မှုအတွက် အာနိသင် သက်ရောက် မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဂိုက်ဗသ် ၊ အလ္လာဟ်သတ်မှတ်သည့်ကံကြမ္မာ များမှတစ်ခု ဖြစ်၏
) اٴَقْدٰارُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاٰ تُغٰالَبُ وَإِرٰادَتُهُ لاٰ تُرَدُّ وَ تَوْفیقُهُ لاٰ یُسْبَقُ(
( မည်သည့် အရာကိုမဆို အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်မှ ကံကြမ္မာ အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်လျှင် ထိုအရာသည် မည်သည့် အခါမှ ပျက်စီးခံရမည်၊အရေးနှိမ့်ခံရမည်မဟုတ်ချေ။ ၎င်း၏ ရည် မှန်း ရည်စူးမှု သည် မည်သည့် အခါမှ ငြင်းဆို ရမည် မဟုတ်ချေ။ ၎င်း၏ သောင်းဖီး (လုပ်နိုင်ရည်စွမ်းအားအပေါ်) အခြား မည် သည့် အရာမှမကျော်တက်နိုင်ချေ။ ) 
ဤ စာသားသည် အေမာမ်ဇမာန်း (4) အနေဖြင့် မိမိ ကိုယ် စား လှယ်တော် နှစ်ပါး ဖြစ်သည့် ဟဇရသ် အွစ်မန် ဗင် စအီးဒ် နှင့် ၎င်း၏ သားတော် ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် ဗင်အွစ်မန် ပို့ပေး ခဲ့ သည့် အဖြေပေး စာချွန်တော်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အေမာမ်ဇမာန်း (4) အနေဖြင့်ဤ အဖြေပေးစာချွန်မိမိ၏ ဂိုက်ဗသ် အကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ညွှန်းကြားမိန့်ဆို ထားပါ သည်။ ဤခေါင်းစဉ် သည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင် သတ် မှတ်ထား သည့်ကံကြမ္မာများမှ တစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။ အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သခင်၏ သေချာပေါက်ကျိန်သေ ရည်ရွယ် နှင့်လည်း စပ်နွယ်နေပါသည်။
အေမာမ်ဇမာန်း (4) အနေဖြင့်ဤ အဖြေပေးစာချွန်တော် တွင်အချို့ ပွိုင့်များ ဘက်သို့ ညွှန်း ပြမိန့်ဆိုထားပါသည်။
၁။ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မျှ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သတ်မှတ် ထား သည့် ကံကြမ္မာ နှင့် ယှဉ်ပြိုင် အောင်နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ အကြောင်းမှာ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သည် مقدِّر کلّ قَدَر ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ စွမ်းအားအင်အား သည် ရှိသမျှ စွမ်းအား အင်အား ထက်ပို၍ သာလွန်ပေသည်။
၂။ အကယ်၍ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်မှအရာတစ်ခုခုကိုသေချာပေါက်ရည်ရွယ်လိုက်လျှင်၎င်း၏ရညရွယ် ချက်ကိုမည်သူမျှ ချိုးနိုမ့်၍ ရမည်မဟုတ်ချေ။ ၎င်း ရည်ရွယ် ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်နေရာတွင် အတား အဆီး လုပ်၍ ရမည်မဟုတ်ချေ။အကြောင်းမှာ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်၊ ရည်မှန်းချက် ၏ အပေါ် တွင် အထက်တွင် မည်သူ တစ်ဦး တစ် ယောက်မျှ ၏ ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်း ချက်မရှိသည့် အတွက် ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိုအာတစ်ခု တွင် အေမာမ် စဂျာဒ်(7) မိန့်ကြားတော်မူသည်။
( အိုမွေးမြူဖန်ဆင်းတော်မူသည့် အရှင် ချီးမွမ်းထောမနာ ခြင်း အရှင်အတွက် သီးသန့် ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အရှင်သည် မည်စည့်အခါမှ ပျက်စီးရှုံးနှိမ့်ခြင်ခံရမည်မဟုတ်သည့် စွမ်းအား ရှင် (ကံကြမ္မာရှင် ) ဖြစ်တော်မူ၏။ ) 
၃။ အလုပ်ဖြစ်မြောက်ခြင်းသည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သာ ဖြစ်ပါသည်။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် လက်မခံသ၍ မလိုလားတော်မူသ၍ မည်သည့်နှိုင်းဆချင့်ချိန်မှု ဖြစ်စေ ကြိုးစား အား ထုတ်မှု ဖြစ်စေ အကျိုးဖြစ်မည်(အောင်မြင်မည်) မဟုတ် ချေ။ အလုပ်တိုင်းကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မလွဲမသွေ အလ္လာဟ်အပေါ် မျှော်လင့်ချက်ထားရှိ ရပေမည်။ ၎င်းထံမှ အကူ အညီတောင်းခံရပေမည်။ ၎င်း၏ အချစ်တော်များ ကို အမှီသဟဲ ပြု၍ အောင်မြင်မှု ဆွတ်ခူးနိုင်ရန်အတွက် ၎င်း၏ရှေ့မှောက်ဝယ် တောင်းဆို ခစားရပါမည်။
) اٴَمَّا الْحَوٰادِثُ الْوٰاقِعَةُ فَارْجِعوُا فیهٰا إِلٰی رُوٰاةِ حَدیثِنٰا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَیْكُمْ وَ اٴَنَا حُجَّةُاللهِ عَلَیْهِمْ(
ဤဟဒီးစ်တော်သည် အေမာမ်ဇမာန်း(4) အနေဖြင့် အစ်္စ ဟက် ဗင်ယအ်ကူဗ် ၏ မေးခွန်းများကို ဖြေကြား မိန့်တော် မူထား သည့် အဖြေများ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဤ မြင့်မြတ် သည့် ဟဒီးစ်တော်တွင် အေမာမ် (4) အနေဖြင့် ဂိုက်ဗသ် ကာလတွင် မိမိ၏ရှီအာများကို ဖြစ်ပေါ်လာ သည့် အဖြစ် အပျက်များ နှင့်ရင်ဆိုင်ရချိန် ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန် ဝတ္တရား ဘက်သို့ ညွှန်ပြ မိန့်ကြားထားပါသည်။
ကိုယ်တော် (4) အနေဖြင့် ရှီအာများကို အဲဟ်ကာမ် မေရှ ရီအီ နှင့် အခြား ဥပဒေသပညတ်တော်များ ကိုနားလည် သဘော ပေါက် ဟဒီးစ်တော်များ၏ရာဝီ များ (တစ်နည်းအားဖြင့် ) ရှီအာ ဖိုကဟာများ (မရ်ဂျာတော်များ) ဘက်သို့ ဦးလှည့်ရန် မိန့်ထား တော်မူသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်း(မရ်ဂျာတော်များ) သည် ဟဒီးစ်တော်များ ကို ကောင်းမွန်စွာ သဘောပေါက် နားလည် သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပြင် (ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်း ဖြစ်သည့် ) အာမ် (عام) ၊ ခါစ် (خاص) ၊ မိုဟ်ကမ်(محکم) ၊ မိုသရှာဗေ (متشابه) ၊ ဆဟီး (صحیح ) နှင့် ဗသွေ (باطل) များကို နားလည်သဘောပေါက်ပေသည်။
အေမာမ်ဇမာန်း(4)အမြင်တွင် ((ဟဒီးစ်တော်များ ရာဝီ)) ဆိုသည်မှာ ရီဝါယသ်ကိုသာလျှင် ဆင့်ပြန်သူကို မခေါ်ဆိုချေ။ ၎င်းအပြင် ထို (ဟဒီးစ် (ခ)ရီဝါယသ်) ကို မှန်ကန်စွာ သဘော မပေါက်နားမလည်သူ ကိုမခေါ်ဆိုပေ။ အကြောင်းမှာ ဤ ကဲ့သို့ သော် ပုဂ္ဂိုလ်များ သည် ဖေက်ဟီ နှင့်အခြားပြဿနာ များ၏ အခက် အခဲအထုံးကို ဖြေနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။
ဂိုက်ဗိသ် ကာလတွင် ဖိုကဟာများ (မရ်ဂျာတော်များ) ဘက် သို့ ဦးလှည့်ခြင်းသည် မွတ်သဟဗ် အလုပ် တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ တနည်း အားဖြင့် ဝါဂျစ်ဗ်ဗေရှရီအီ (အစ္စလာမ့်တရားတော်အရ မပြုမနေရ) ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဖိုကဟာများ (မရ်ဂျာ တော်များ) သည် အေမာမ်ဇမာန်း(4)ဘက်မှ ဤကိစ္စ အတွက် ခန့်အပ် ထားသူများ ဖြစ်ပါသည်။ အေမာမ်ဇမာန်း(4) ၏အမိန့် ကို ဆန့်ကျင် သွေဖည်၍ မရချေ။
ဤ ဟဒီးစ်တော်၏စာသားသည် အေမာမ်ဇမာန်း(4) အနေ ဖြင့် အစ်္စဟက် ဗင်ယအ်ကူဗ် ၏ မေးခွန်းများကို ဖြေကြား မိန့် တော် မူထား သည့် စာချွန် အဖြေစာ ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါ သည်။ အစ်္စဟက် ဗင်ယအ်ကူဗ်ပြောကြားပါသည်။ ကျွန်ုပ် အနေဖြင့် အချို့ မေးခွန်းများကို စုစည်းခဲ့ပါတယ်။ ပြီး နောက် ကိုယ်တော်(4) ၏ ဒုတိမြောက်ကိုယ်စားလှယ်တော် မိုဟမ္မဒ် ဗင်အွန်စမန်အိုမရ်ရီ ထံ ပို့သခဲ့ပါတယ်။၎င်းထံ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဤမေးခွန်းများပါသည့်စာချွန် ကို အေမာမ် ဇမာန်း(4) ထံ တော်ပို့သပေးပါ။ ပြီးနောက် ကိုယ်တော်ထံ အ ဖြေပေးမိန့်ကြားပေးဖို့လည်း မေတ္တာ ရပ်ခံပေးပါ။ အေမာမ်ဇမာန်း (4) အနေ ဖြင့် အဖြေပေးစာချွန်တော်တွင် မိမိ၏ လက်ရေး မှု ဖြင့် အချို့အရာများကို သတိပေးရေးသားပြီး ဤကဲ့သို့မိန့် တော် မူလေ၏။
ကိုယ်တော် (4) အနေဖြင့် မိမိ၏ ဤမွန်မြတ်လှသည့်စကား အတွင်း ဤပွိုင့်အချက်ဘက်သို့ ညွှန်၍ မိန့်ကြားထားပါသည်။ ဝါဂျစ်ဗ်ထိုက်သည့် ဥစ္စာပစ္စည်း၏ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခြင်း၏ အကျိုး အမြတ် မှာ မနုဿလူသားကိုယ်တိုင်ကို ရောက်စေ ကြောင်း မိန့်ကြားပါသည်။ အေမာမ် (4) အနေဖြင့် ဤဥစ္စာ ပစ္စည်း (ငွေ)များ ကိုပေးဆောင်သူ များ ၏နဖ်စ် သန့်ရှင်း စင် ကြယ် စေရန် အတွက် လက်ခံသဘောတူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အေ မာမ် (4) အတွက် လိုအပ်တောင့်တသည့်အတွက် (ဆင်းရဲ သည့် အ တွက်) ကြောင့်မဟုတ် ချေ။ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် တွင် လည်း ဇကားသ် နှင့်ပတ်သက်သည့် အာယသ် တော်တွင် ဤ ပွိုင့်ဘက်သို့ ညွှန်ပြထားပါသည်။
((အိုတမန်တော်မြတ် (6) အသင်အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဥစ္စာ ပစ္စည်းများမှ ဆဒ်ကာ(ဇကားသ်) ကိုယူပါလေ။ထိုမှသာ ဤ လုပ် ရပ် ဖြင့် ၎င်းတို့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားပေမည်။ပြီးနောက် ၎င်း တို့ဖို့ ဒိုအာ များ တောင်းပေးပါလေ။ အသင်၏ ဒိုအာ သည် ၎င်း တို့အတွက် နှလုံးသားကို ကျေနပ် နှစ်သိမ့်ငြိမ်း ချမ်းဖို့ ဖြစ်ပေ လိမ့်မည်။) 
) اٴَنَّهُ مَنِ اتَّقیٰ رَبَّهُ مِنْ اخْوٰانِكَ فِي الدِّینِ وَ اٴَخْرَجَ مِمّٰا عَلَیْهِ إِلیٰ مُسْتَحِقّیهِ، كٰانَ آمِناً مِنَ الْفِتْنَةِ الْمُبْطِلَةِ، وَ مِحَنِهَا الْمُظْلِمَةِ الْمُظِلَّةِ وَ مَنْ بَخِلَ مِنْهُمْ بِمٰا اٴَعٰارَهُ اللهُ مِنْ نِعْمَةِ عَلیٰ مَنْ اٴَمَرَهُ بِصِلَتِهِ، فَإِنَّهُ یَكُونُ خٰاسِراً بِذٰلِكَ لِاٴُوْلاٰهُُ وَآخِرَتِهِ(
ဤ စကားစုသည် အေမာမ်မဲဟ်ဒီ(4) အနေဖြင့် ရှိက်္ခမိုဖီးဒ် (ရ.ဟ) အမည်နှင့် ရေးသားခဲ့သည့် ဒုတိယ စာချွန်တော်၏ အစိတ် အပိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တော်အနေဖြင့် စာချွန်တော် ၏ ဤ အစိတ်အပိုင်း တွင် ဝါဂျစ်ဗ်တိုက် နေသည့်ဥစ္စာပစ္စည်း များအတွက် (ရှရီအီ)အခွန်ကို သက်ဆိုင်သူတိုက်တန်သူ ထံ ပို့ပေး ရမည့် အကြောင်း ဤအလုပ်တွင် ကောင်းမှုနှင့် လာဒ် မင်္ဂ လာ ရှိကြောင်း ဘက်သို့ညွှန်ပြ ထားပါသည်။ အေမာမ် (4) အနေဖြင့် အကြင်မည်သူမဆို သက္က်ဝါရှိမည် (သီလ၊ သမာဓိ ရှိမည်) ၊ မိမိတာဝန်ဖြစ်သည့်ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုင်ရာ (ရှရီအီ) အခွန် (ဥပမာခါမ်းစ် ၊ဇကားသ် စသည်ဖြင့် ) ကိုသက်ဆိုင်သူ၊တိုက်တန်သူထံရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဆိုလျှင် အာမခံ ပေးထား ပါသည်။ထို (အာမခံချက်)မှာ ဤကဲ့သို့အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် နှစ်သက်မြတ်နိုး သည့်အလုပ်ကို လုပ်ဆောင် သည့် အတွက် ရလာဒ် အဖြစ် ပြဿနာများ နှင့်ဘေးဒုက္ခများမှ ကင်း ဝေမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကြင်မည်သူမဆို ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုင် ရာ (ရှရီအီ) အခွန် ပေးဆောင်မှုတွင်ပေါ့လျော့မည်၊ရှရီအီ အခွန် များ ကို ပေးဆောင်ရာတွင် ကပ်စေးနည်းမည်၊ တွန့်တို မည် ဆို လျှင် ၎င်း၏ ကံကြမ္မာတွင်လောကီလောကတ္တရာ ဆုံး ရှုံးမှုမှအပအခြား ဘာမှဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။
ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုင် ရာ (ရှရီအီ)အခွန်ပေးဆောင်မှုပြုချိန် တွင် ရှိုင်တွန် (လ.န) သည် လူသားအား သွေးဆောင် ဖြားယောင်း လေ၏။၎င်းအား ဆင်းရဲ သွားမည်ဟုကြောက်လန်အောင် ပြု လေ၏။ အေမာမ် (4) ၏ ဤမိန့်ကြားချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သိရှိ နားလည်သဘောပေါက် ရသည်မှာ - ဖြစ်ရပ်မှန် ၊အမှန် တကယ် မှာ ခွမ်းစ်နှင့်ဇကားသ် မပေးဆောင်ခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ဖြစ်စေသည် မဟုတ်ဘဲ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏လမ်းတွင် မပေးကမ်း မလှူဒါန်း သည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ် သည်ဆိုတာ ဖြစ်ပါသည်။
ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုင် ရာ (ရှရီအီ) အခွန်ပေးဆောင်မှုပြုခြင်းဖြင့် တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုက်သင့်ထိုက်တန်သူကို ပေး ဆောင်ခြင်း သည် မနုဿလူသား ၏ ဥစ္စာပစ္စည်း ကိုတိုးပွား လာဒ်ရှိ စေပါ သည်။တစ်နည်းအားဖြင့် နာမ်ပိုင်ဆိုင်ရာ ရိက္ခာ ကိုလည်း တိုးပွားစေပါသည်။ မည်းမောင်းနေသည့်လမ်းများတွင်တွင်းကို သိရှိမြင်တွေ့နိုင်ရန် အတွက် နှင့် လမ်းမှန် ကိုပြသည့် အလင်း ရောင် ဆီမီးခွက်ကို ရလိုက် သကဲ့ သို့ဖြစ် ပါသည်။
အလျင်အမြန် ဖူးပွင့်ရန်အတွက် ဒိုအာ ပြုခြင်း
ဤ ဟဒီးစ်တော်၏ စာသားသည် အေမာမ်ဇမာန်း(4)အနေ ဖြင့် အစ်္စဟက် ဗင်ယအ်ကူဗ် ၏ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားမိန့် တော် မူထား သည့် အဖြေ ဖြစ်ပါ သည်။ ဤဟဒီးစ်တော်တွင် အေမာမ် (4)အနေ ဖြင့် အလျင်အမြန်ဖူးပွင့်ရန်အတွက်ဒိုအာ များများပြုလုပ်ရန် မိန့်ထားပါသည်။ဤအေမာမ် ၏ အမိန့် တော် သည် ဆိုလိုချက် (ဒိုအာများများလုပ်ရန်ကိစ္စ) ၏ အရေးကြီး မှုကို ဖော်ပြနေပါသည်။ အကြောင်းမှာ ရှီအာများ၏ အခက်အခဲများ ၊ ဘေးဒုက္ခများ အဆင်ပြေ ကင်းဝေမှုသည် ဟဇရသ် အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (4) ၏ဖူးပွင့်မှု အရိပ် အောက်မှာ သာလျှင် ဖြစ်နိုင်သည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အေမာမ် (4) ဂိုက်ဗသ်တွင် ရှိနေသမျှ ရှီအာလည်းပဲမင်းဆိုးမင်းညစ် ရက်စက် ယုတ်မာ ညှဉ်းပန်းသည့်အာဏာ ရှင်များ၏ ပစ်မှတ် ဖြစ်နေ ပေမည်။
၂။အေမာမ်ဇမာန်း(4)ဖူးပွင့်မှု နှင့် ပတ်သက်ပြီးဗဒါအ် ( بداء)ဖြစ်ပေါ်ပါမည်။နောက်တစ်မျိုးပြောရမည်ဆိုလျှင် ဖူးပွင့်မှု တွင် အလျင်အမြန်နှင့် နှောင့်နှေး မှု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ်တော် (4)အလျင် အမြန် ဖူးပွင့်ဖို့အတွက် အကြောင်းခံအချက်များ မှ တစ်ခုမှာ ဒိုအာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိ နားလည် ထား သည်မှာ ဒိုအာ သည် နှလုံးသား၏မေတ္တာရပ်ခံချက် နှင့် အခြေ အနေ ဖန်တီးပေးမှု မရှိဘဲ အာနိသင်သက်ရောက်မှု ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ မနုဿာလူသားအနေဖြင့် နှုတ်နှင့်အတူ နှလုံးသား နှင့်ပါ မေတ္တာ ရပ်ခံတောင်းဆိုရမည်။ လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့် သုံး မှု တွင်လည်း မိမိကိုတိုင် (အေမာမ်(4) အလျင်အမြန် ဖူးပွင့် လာရန်အတွက်) အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီး ပေးရပါမည်။
) إنّٰا غَیْرُ مُهْمِلِیْنَ لِمُرٰاعٰاتِكُمْ، وَ لاٰ نٰاسینَ لِذِكْرِكُمْ، وَ لَوْلاٰ ذٰلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ الَّلاٴْوٰاءُ وَاصْطَلَمَكُمُ الْاٴَعْدٰاءُ(
( ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အသင်တို့အား စိစစ်စစ်ဆေး ရာတွင်၊ အုပ်ထိန်း မှုပြုရာတွင် ပျက်ကွက်မှု ၊ဂရုမစိုက်မှု ကိုမပြုပါ။ အသင်တို့၏ သတိရတမ်းတမှု ကိုမည်သည့်အခါမှ မမေ့ပါ ၊အကယ်၍ ဤကဲ့သို့သာ မပြုခဲ့မည်ဆိုလျှင် အသင်တို့အပေါ် အခက် အခဲများ ၊ ဘေးဒုက္ခများကျရောက်လာပေမည်၊ ရန်သူ များ အသင်တို့ကို အမြစ်ပြတ်တိုက်ခိုက် မည်ဖြစ်ပေသည်။ )
အေမာမ်ဇမာန်း (4) အနေဖြင့် ရှိက်္ခမိုဖီးဒ် (ရ.ဟ) အတွက် အဖြေပေးစာချွန် နှစ်စောင်ပို့ပေးခဲ့ပါသည်။ ပထမစာချွန်တွင် ကိုယ်တော်အနေဖြင့် မိမိ၏ ရှီအာ မွတ်စလင်များ ကို သတင်း ကောင်းပေးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် အသင်တို့ အပေါ် အစဉ်အမြဲ မျက်စိအောက်တွင် ထားရှိပြီး ဂရုပြု ထည့်သွင်း စဉ်း စားနေပါသည်။ အသင်တို့အား မည်သည့်အခါမှ မေ့မသွားချေ။ ဤအတွက်ကြောင့် ရန်သူများ၏ အန္တရာယ်မှ လုံခြုံနေပေသည်။ ရှီအာ သည် ဖိနှိပ်ညှဉ်းပမ်းမှု အားတော်လှန် သည့် အတွက် ကြောင့် နှင့် အမှန်တရားနှင့် ဖြစ်ရပ်မှန် တရားဘက် အစဉ်အမြဲ နောက်လိုက် ပေးသဖြင့် ညှဉ်းပမ်း ရက်စက် ယုတ်မာသည့် အာဏာ ပိုင်များ ၊ဆန့်ကျင်သူများ၏ ရက်စက်ညှဉ်း ပမ်းမှု၏ ပစ် မှတ်ဖြစ်ခဲ့ ရပါသည်။ ဤ အတွက်ကြောင့် အခက်အခဲများ ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခများ မှ ၎င်းတို့ကို ကူညီဖေးမရန် နှင့် ၎င်းတို့ကို အမြစ်ပြတ် တိုက်ခိုက်မှုမှ ကယ်တင်နိုင်မှုသူ တစ်ဦး တစ် ယောက်လိုအပ်ပါသည်။ ဤအဖြေပေးစာချွန်တော်တွင် အေမာမ် ဇမာန်း (4) အနေဖြင့် မိမိရှီအာများကို သတင်း ကောင်း ပေး ထားပါသည်။မည်သို့ ဆိုလင့်ကစား ကျွန်ုပ်သည် ဂိုက်ဗသ်တွင် ရှိနေသော်လည်း အသင်တို့ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပါသည်။ မည်သည့်အခါမှ ရန်သူများ၏ အကွက် များကို အောင်မြင်အောင် အခွင့်မပေးခဲ့ချေ။ ရှီအာမဇ်ဟဗ် နှင့် ရှီအာမွတ်စလင်မ်များကို အမြစ်ပြတ် တိုက်ခိုက်မှုမှ ကယ်တင်ပေးပါသည်။ အေမာမ် အနေဖြင့် မိမိ၏ အေမာမ်မသ် သက်တမ်း ကာလတစ်လျှောက် လုံး အခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းခဲ့ပါသည်။ (ဤ)နမူနာ များ သည် အေမာမ်(4) ကတိကဝတ် တည်မှုကို အပြည့်အစုံ ဖော် ညွှန်း နေမှုများ ဖြစ်ပါသည်။
) اٴَنَا خٰاتَمُ الْاٴَوْصِیٰاءِ، وَ بِي یَدْفَعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَلاٰءَ عَنْ اٴَهْلي وَ شیْعَتِى(
( ကျွန်ုပ်သည် နောက်ဆုံး အောင်စီယာ ဖြစ်ပါသည်။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သည် ကျွန်ုပ်ကြောင့် ဘေးအန္တ ရာယ် ၊ဘေး ဒုက္ခ များကို ကျွန်ုပ်၏ အိမ်တော်သူ အိမ်တော် သားများ ကျွန်ုပ်၏ ရှီအာ များ နှင့် ကင်းဝေးစေတော်မူသည်။ ) 
ဤ ဟဒီးစ်တော်မြတ်အား ရှိက်္ခစဒူက်္ခ(ရ.ဟ) နှင့် ရှိက်္ခသူစီ (ရ.ဟ) တို့သည် အဘူနစ်ရ်ခါဒမ် ထံမှ ဆင့်ပြန်ထားပါသည်။ အဘူနစ်ရ် ပြောကြားသည်မှာ -
ကျွန်တော် အနေဖြင့် အေမာမ်(4)၏ရှေ့တော်မှောက် တွင် အခစားဝင်ရောက်သည့်အခါ အေမာမ် မှမိန့်တော်မူသည်။ ((အသင်ကျွန်တော်ကို သိပါသလား?))ကျွန်တော်ပြန်လျှောက် ထား ပါ သည်။ ((ဟုတ်ကဲ့)) ၊ပြီးနောက်အေမာမ် မိန့်လေ၏။ ((ကျွန်တော်ဘယ်သူ လဲ ?)) ကျွန်တော်ပြန် လျှောက်ထား ပါ သည်။ ((အရှင်သည် ကျွန်တော်၏ အရှင် နှင့်ကျွန်တော်အရှင် ၏ သား တော် ဖြစ်ပါသည်။)) အေမာမ် မိန့်တော်မူ၏။ ((ကျွန် တော် အနေဖြင့်အသင်ကိုဤမေးခွန်း မေးတာ မဟုတ် ပါ။)) ကျွန်တော်ပြန်လျှောက်လေ၏။ ((အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင် ကျွန်တော်အား သခင်အပေါ် စတေးနိုင် စွမ်းပေး သနား တော် မူပါစေ။ အရှင်ကိုယ်တော်တိုင် မိမိအခြေအနေကို ရှင်းပြပေး တော်မူပါ။ )) အေမာမ် မိန့်တော်မူ၏။ ((ကျွန်ုပ်သည် နောက်ဆုံး အောင်စီယာ ဖြစ်ပါသည်။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သည် ကျွန်ုပ်ကြောင့် ဘေးအန္တ ရာယ် ၊ဘေး ဒုက္ခ များကို ကျွန်ုပ်၏ အိမ်တော်သူ အိမ်တော် သားများ ကျွန်ုပ်၏ ရှီအာ များ နှင့် ကင်းဝေး စေတော်မူသည်။))
ဟဒီးစ်တော်၏ ဤအစိတ်အပိုင်း တွင် အေမာမ် (4) အနေ ဖြင့် ပွိုင့် နှစ်ခုဘက်သို့ ညွှန်ပြ၍ မိန့်ထားပါသည်။
၁။ အေမာမ် (4)သည် နောက်ဆုံး အောင်စီယာ ဖြစ်ပါ သည်။ဝစွာယသ် ( وصایت) နှင့် အေမာမ်မသ် (امامت) သည် ကိုယ် တော် အပေါ်အဆုံးသတ်သွားပါသည်။ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါ သည်။ ဤနေရာတွင် ဝစွာယသ် ( وصایت) ဆိုသည်မှာ ဟဇရသ် အာဒမ် (7) ၏သားတော် ဟဇရသ် ဟာဘီးလ် သို့မဟုတ် ဟဇ ရသ် ရှီးစ် မှစတင်ပြီး အေမာမ်ဇမာန်း (4) အပေါ်အဆုံးသတ် တာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဝစွာယသ် ( وصایت) အဆုံးသတ်ခြင်း ကို ဆိုလိုတာ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ (ထို ဝစွာယသ် ( وصایت) မှာ) ဟဇရသ် အလီအစ်ဗ်နေအဘီသွာလစ်ဗ် (7) မှအစပြုတာ ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူပင်ဆိုစေကာမူ ကိုယ်တော် ပြီးနောက် မည် သည့် အေမာမ်မျှ ရှိတော့မည်မဟုတ်ချေ။ အကြင်မည်သူမဆို အေမာမ်မသ် နှင့်ပတ်သက်ပြီး (အေမာမ်ဖြစ်ကြောင်း) အခိုင် အမာ ပြောဆိုမည်ဆိုလျှင် ၎င်း၏ပြောဆိုမှုသည် အမှားဖြစ်ပြီး လိမ်လည်မှုသာ ဖြစ်ပါသည်။
၂။အေမာမ်(4) ၏ ရှီအာများသည် သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး ဘေးဒုက္ခ၊ဘေးအန္တရာယ် အမျိုးမျိုး တို့နှင့် ရင်ဆိုင်ရပေမည်။ ဤ ဟဒီးစ် တော်မြတ်တွင် အေမာမ် ဇမာန်း(4) မိန့်တော်မူသည်။
( အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သည် ကျွန်ုပ်ကြောင့် သာလျှင် ဘေးအန္တ ရာယ် ၊ ဘေး ဒုက္ခ များကို ကျွန်ုပ်၏ အိမ်တော်သူ အိမ်တော် သားများ ကျွန်ုပ်၏ ရှီအာ များ နှင့် ကင်းဝေး စေ တော် မူသည်။ )
ဤဟဒီးစ်တော်တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။
(က) အေမာမ်ဇမာန် (4) ဆိုလိုသည်မှာ ဂိုက်ဗသ် ကာလကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင် ဆိုလိုသည်မှာ ရှီအာ များသည် ဂိုက်ဗသ်ကာလတွင် အေမာမ် နှင့် သဝစူလ်နှင့် သာ လျှင် ဘေးအန္တရာယ်များ ဘေးဒုက္ခများမှ ကင်းဝေးနိုင်ပါသည်။
အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (4) အနေဖြင့် မိမိအဖြေပေးစာချွန်တော်တွင် ရှိက်္ခ မိုဖီးဒ် (ရ.ဟ) အား မိန့်ကြားထားပါသည်။
(ခ) အေမာမ်ဇမာန် (4) ဆိုလိုသည်မှာ ဖူးပွင့်ပြီး ကာလကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင် ဆိုလိုသည်မှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သခင်သည် ကိုယ်တော်အားဖူးပွင့်တော် မူခြင်းဖြင့် မတရားရက်စက်ညှဉ်းပမ်း နှိပ်စက်သူများအား လုံး အပေါ် အားသာစေမည်။ (လွမ်းမိုးစေမည်။) ဘေးအန္တရာယ်များ ၊ ဘေးဒုက္ခများ၊ဆင်းရဲဒုက္ခများ ကိုမိမိ၏ အိမ်တော်သူ အိမ်တော် သားများနှင့်ရှီအာများ နှင့်ဝေးကွာအောင်ထားလေသည်။
ဖြစ်နှစ်ခြေနှစ်ခုစလုံးကို ပေါင်း၍လည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်မှာ - ဤ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်လေ၏။ အေမာမ်ဇမာန် (4) သည်မိမိ၏ ဂိုက်ဗသ် ကာလ တွင်ဖြစ်စေ ဖူးပွင့်သည့်ကာလတွင်ဖြစ်စေ ရှီအာများကို ဆင်းရဲဒုက္ခများ ၊အခက်အခဲများ ဝေးအောင်ပြု ပေး လေသည်။
 سوره تکویر ، آیت 29
 الغیبة طوسی ، ص 247 ، ح 216 ، الهدایة الکبری ، ص 359 ، کشف الغمة ، ج3، ص 303 ، الخرائج والحرائج ، ج 1 ، ص 459 ، دلائل الامامة ، ص 506 ، بحارالأنوار ، ج 25 ، ص 337 ، ح16
 မိုကဆ်စေရဟ်(သို့) မိုကဆ်စေရ်ဟ် ဆိုသည်မှာ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (: ) အတွက် ဝေလာယသ် အေလာဟီ မှ မည်သည့်အရာကို မှ လက်မခံသူများကို ခေါ်ဆိုပါသည်။
 မိုဖောက်ဝေဇဟ် မွတ်စလင်မ်များမှ အုပ်စု တစ်စု ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း တို့ လက်ခံ သက်ဝက်ယုံကြည်သည်မှာ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင် သည် စကြာဝဠာ ကို ဖန်ဆင်း ပြီးနောက် မိမိ၏ လိုလား ရည်မှန်းမှုကို အေမာမ် ၁၂ပါး (: ) အားပေးအပ်လိုက်ပြီး အေမာမ် ၁၂ပါး (: ) အနေဖြင့် လိုလား ရည်မှန်း သည့်အတိုင်း ဤစကြာဝဠာ အား အသုံးပြု နိုင်သည်ဟု သက်ဝင် ယုံကြည် ထားပါသည်။
 تفسیر علی بن ابراھیم، ج2، ص 409، بصائر الدرجات، ص537، ح47، بحار الانوار، ج5، ص114، ح 44
 کمال الدین، ج 2، ص 520، ح 49، فقیہ، ج 1، ص498، ح 1427، تہذیب الاحکام، ج 2، ص 175، ح 155، الاستبصار، ج 1، ص 291، ح 10، الغیبة، طوسی، ص296، ح 250، احتجاج، ج2، ص298، بحار الانوار، ج53، ص 182، ح 11، وسائل الشیعة، ج 4، ص 236، ح 5023
 سورہ طہ، آیت 14
 الغیبة، طوسی، ص 271، ح 236، احتجاج، ج2، ص 298، بحار الانوار، ج52، ص16، ح12، وسائل الشیعة، ج 4، ص201، ح 4919
 فقیه ، ج 1 ، ص 217 ، ح 651 ، بحازالأنوار ، ج 79 ، ح23 .
 احتجاج، ج2، ص 308؛ بحار الانوار، ج53، ص161، ح3؛ وسائل الشیعة، ج 6، ص490، ح 8514
 سور ہ ابراھیم، آیت7
 احتجاج، ج2، ص 312، بحار الانوار، ج53، ص165، ح4
 کمال الدین، ج 2، ص 493، ح 18، الخرائج والجرائح، ج 1، ص 443، ح24، بحار الانوار، ج51، ص331، ح 56
 سور ہ فاطر، آیت15
 کافی، ج 1، ص 521، ح 13، کمال الدین، ج 2، ص 490، ح 13، ارشاد، ج 2، ص 361، اعلام الوری، ج2، ص264، کشف الغمة، ج 3، ص251، بحار الانوار، ج51، ص329، ح 52، مدینة المعاجز، ج 8، ص 85
 سور ہ توبہ، آیت105
 تفسیر برہا ن، ج2، ص838، ح 2
 نهج البلاغہ، حکمت 417، بحار الانوار، ج6، ص 36 تا 37، ح 59
 دلائل الامامة، ص297
 سورہ انفال، آیت 33
 کمال الدین، ج2، ص485، ح10،الغیبة، شیخ طوسی، ص292، ح247، احتجاج، ج2 ، ص284،اعلام الوری، ج2، ص272، کشف الغمة، ج3، ص340، الخرائج و الجرائح، ج3، ص1115، بحار الانوار، ج53، ص181، ح10
 احتجاج، ج2، ص315، بحار الانوار، ج53، ص177، ح8
 کمال الدین، ج2، ص511، ح42، الخرائج و الجرائح، ج3، 1111، بحارالانوار، ج53، ص191، ح19
 صحیفہ سجادیة، دعا 49، شمارہ14، مہج الدعوات، ص222، بحار الانوار، ج92، ص428، ح43
 کمال الدین، ج2، ص484، ح10، الغیبة، شیخ طوسی، ص291، ح247، احتجاج، ج2 ، ص284،اعلام الوری، ج2، ص271، کشف الغمة، ج3، ص338، الخرائج و الجرائح، ج3،ص1114، بحار الانوار، ج53، ص181، ح10، وسائل الشیعہ، ج27، ص140، ح33424
 احتجاج، ج2، ص325، بحار الانوار، ج53، ص177، ح8
 احتجاج، ج2، ص323، الخرائج الحرائج، ج2، ص903، بحارالانوار، ج53، ص175، ح7
 کمال الدین، ج2، ص441، ح12، الغیبة، طوسی، ص246، ح215، بحار الانوار، ج52، ص30، ح25
 احتجاج، ج2، ص323، الخرائج والجرائج، ج2، ص903، بحارالانوار، ج53، ص175، ح7